January 2011 | ပျူနိုင်ငံ
Posted by ကိုအောင် at 00:23 22 comments
Posted by ကိုအောင် at 10:542comments
ယခင် အပိုင်း(၃)မှ အဆက် …
ရွာလူကြီးတွေနဲ့ တောင်ပိုင်သားတွေရဲ့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုနေတဲ့
စကားဝိုင်းမှာ ထူးခြားစွာ တိတ်ဆိတ်နေသူတွေက ရွာရဲ့ မြောက်ပိုင်း
မှာ နေထိုင်သူတွေပါ။ အုပ်စုလိုက် စုထိုင်နေတဲ့ မြောက်ပိုင်းသားတွေ
ထံက အသံတချို့ ထွက်လာပါတယ် …
“ကျုပ်တို့ အထင်တော့ ရွာမှာ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ ထင်တယ် …”
“မနေ့ညက တစ်ညလုံး သင်္ချိုင်းဟောင်းဖက်က အသံတွေ ကြားနေရတယ်”
သူတို့ ၀င်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် အဘစံ အပါအ၀င် လူကြီးအားလုံး
မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက် ဖြစ်သွားပါတယ် …
“ဘယ်လို ဘယ်လို၊ သင်္ချိုင်းဟောင်းဖက်က အသံတွေ ကြားရတယ်
ဟုတ်လား ငကျွဲ …”
“ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကြားရတာ နှစ်ည ရှိနေပြီ၊ လူတွေ အုပ်စုလိုက် ပြေးလွှား
သံတွေ၊ အဲဒီနားက အိမ်တွေအားလုံး ကြားနေရတာ၊ ကျုပ်တို့ မြောက်ပိုင်း
သားတွေကို ငကြောက်တွေလို့ အပြောခံရမှာ ဆိုးလို့ အဘတို့ဆီ လာ
“တောင်ပိုင်းရယ် မြောက်ပိုင်းရယ် သဘောမထားပါနဲ့ကွာ၊ တစ်ရွာတည်း
အတူတူနေတာ အရေးအကြောင်းရှိရင် ပြောသင့်ဆိုသင့် တိုင်ပင်သင့်
တာတွေကို တိုင်ပင်ရမှာပေါ့ …”
အဘစံတို့ အပါအ၀င် ရွာသားအားလုံးရဲ့ အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်
တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ ရွာအလယ်ပိုင်းက မီးကင်းအပြင်
ရွာတောင်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းတွေမှာ ညရေးညတာ ကင်းစောင့်ဖို့ ကင်းအဖွဲ့
ထပ်မံတိုးချဲ့ လိုက်ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အစည်းအဝေးက အပြန်
ကိုထွန်းကြိုင်က ကိုမျိုးသိမ်းကို လှမ်းမေးပါတယ်။ … “မျိုးသိမ်းရေ၊ အစည်း
အဝေးကို အဘွား ဒေါ်ယဉ်မေ လာတာ မတွေ့ဘူးနော် …”။ ကိုမျိုးသိမ်းနဲ့
မိကျော့တို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်က ခေါင်းခါပြလျက်။
Posted by ကိုအောင် at 21:30 18 comments
ယခင် အပိုင်းမှ အဆက် ….
ဒုတိယနှင့် တတိယ စစ်ပွဲများ
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်နဲ့ ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲဟာ
အချိန်ကာလအားဖြင့် (၂၈)နှစ် ကွာဝေးပါတယ်။ အဲဒီ(၂၈)နှစ်အတွင်း
မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ “သက်ဦးဆံပိုင်” အမျိုးသား ဘုရင်များဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့
အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အနည်းငယ်သာ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲ စဖြစ်တဲ့ (၁၈၅၂) ခုနှစ်ရဲ့ ပထမ (၃)လ
အတွင်းမှာပဲ ပဲခူးတိုင်း အပါအ၀င် အောက်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံး အင်္ဂလိပ်
စစ်တပ်တို့က ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာဘုရင် ဖြစ်တဲ့ “ပုဂံမင်း” ကို
သူ့ ညီအကိုတွေဖြစ်တဲ့ “မင်းတုန်းမင်းသား” နဲ့ “ကနောင်မင်းသား” တို့က
ပုန်ကန်နေသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ ကျူးကျော်စစ်အား မခုခံနိုင်ခဲ့ပါ။
ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲ (၁၈၅၂)နဲ့ တတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ
စစ်ပွဲ (၁၈၈၅) အကြားမှာ အင်္ဂလန်ရှိ ဗြိတိသျှ ပါလီမန်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ
အင်္ဂလန် ဘုရင်ခံတို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်
တို့အပေါ် စိတ်ဝင်စား လာကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကျူးကျော်စစ်ကို ရှုံးနိမ့်
ခဲ့တဲ့ မြန်မာ ပဒေသရာဇ်များဟာ နောက်ထပ် ကျူးကျော်စစ်ပွဲများအတွက်
ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ကျ
ရောက်နေတဲ့ အောက်မြန်မာပြည်အတွင်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးအား
နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ပုန်ကန်တော်လှန်ကြတဲ့ မျိုးချစ် အင်အားစုတွေကို
ခေတ်မီနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးအတွက် စိတ်အား အထက်သန်ဆုံး
ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ “မင်းတုန်းမင်း” လက်ထက် အိမ်ရှေ့စံ “ကနောင်” မင်းသား
ကြီးပါ။ “ကနောင်” မင်းသားကြီး လုပ်ကြံခံရတဲ့ (၁၈၆၆) ခုနှစ် နောက်ပိုင်း
ခေတ်မီနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးဟာ လုံးဝ ရပ်တန့် ပျက်ပြား သွား
ပါတယ်။ “မင်းတုန်းမင်း” ကွယ်လွန်ခါနီးနဲ့ “သီပေါမင်း” နန်းတက်စ အချိန်
များအတွင်း မြန်မာ့ နန်းတွင်းရေး အရှုပ်တော်ပုံ ကြီးမားစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့
ပါတယ်။ “အာဏာ” လုယူနိုင်သူဟု ထင်ကြေးများကြောင့် မင်းညီမင်းသား
များ၊ အိမ်တော်ပါ လူယုံများ အပါအ၀င် ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေ သတ်ဖြတ်ခြင်း
ခံရပါတယ်။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားပြီး အုပ်ချုပ်ရေး မနိုင်မနင်း ဖြစ်
နေတဲ့ မြန်မာဘုရင်ဟာ (၁၈၈၅) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ တတိယ ကျူးကျော်
စစ်ကို ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ စစ်ပွဲ စတင်ပြီး (၁၄)ရက် အကြာမှာ အင်္ဂလိပ်စစ်
တပ်ဟာ မြန်မာဘုရင်ရဲ့ နန်းတော်ရှိရာ မန္တလေးမြို့တော်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်
ခဲ့တဲ့အတွက် တတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲ (၁၈၂၄)မှ တတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲ
(၁၈၈၅) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား ဘုရင်စနစ်(သက်ဦးဆံပိုင်)
ဟာ နိုင်ငံတော်ကို တိုးတက်အောင်၊ ကာကွယ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့ အနေ
အထား မရှိပါဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး အာဏာ
(၃)ရပ်စလုံးကို ဘုရင်နဲ့ ဘုရင်က တိုက်ရိုက် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ထားတဲ့
မှူးကြီးမတ်ရာ သေနာပတိတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွှတ်တော်တို့ကသာ
ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသား အများစုဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်
ရသော ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့
တရားစီရင်ရေး စနစ်လည်း လုံးဝ မရှိခဲ့ပါ။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး သံတမန် ဆက်ဆံရေးမှာလည်း
ညံ့ဖျင်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမ ကျူးကျော်စစ် မတိုင်ခင် “ဘိုးတော် မင်း”
လက်ထက်က တရုတ်ပြည်သို့ သံတမန် အဖွဲ့တစ်ခု စေလွှတ်ခဲ့ရာ လှည့်
ဖြားမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရပြီး အရှက်တကွဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ပထမ ကျူးကျော်စစ်
အပြီး နန်းတက်လာတဲ့ “သာယာဝတီ” မင်း လက်ထက်မှာလည်း အင်္ဂလိပ်
သံတမန်တွေနဲ့ ပြေလည်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ။
သက်ဦးဆံပိုင် အမျိုးသားဘုရင်စနစ်တွင် ဘုရင်အပါအ၀င် မှုးကြီးမတ်ရာ
သေနာပတိအားလုံးတို့ဟာ အဲဒီခေတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထွက်
များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်တွင် အရေးပါ အရာရောက်သူ
အများစုတို့ဟာ ရှင်ဘုရင် မဖြစ်ခင်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့သော လူယုံ
များ၊ လက်ရဲဇာတ်ရဲ သတ်ဖြတ်ဝံ့သူများ၊ မင်းအလိုလိုက် မင်းကြိုက်အောင်
လျှောက်ထားတင်ပြတတ်သူ အများစုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်အခံ
ပြုလုပ်ဝံ့သူ၊ ခေတ်မီတိုးတက်သော အမြင်ရှိသူဟူ၍ အနည်းစုသာ
အမျိုးသားဘုရင်စနစ်ဟာ အာဏာရှင်ဆန်စွာ ကျင့်သုံးခဲ့သောကြောင့်
နိုင်ငံတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်း အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ တော်လှန်
ပုန်ကန်မှုများကိုလည်း ချေမှုန်းသုတ်သင် ရှင်းလင်းရေး နည်းလမ်းမှ
လွှဲပြီး အပေးအယူ လုပ်ဆောင်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ပထမ ကျူးကျော်
စစ် မတိုင်ခင် “ဘိုးတော် မင်း” လက်ထက် (၁၇၈၃) ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီ
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ထကြွသော မွန်သူပုန်တို့ လက်အောက်သို့
ရန်ကုန်မြို့ပင် ခေတ္တ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။
ကျူးကျော်စစ်ပွဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့သော ဘုရင်များသည် နိုင်ငံတော်ရဲ့
အကျိုးစီးပွား ဓနအင်အားများကို ထင်သလို အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ ဘုရင်
နှင့် အိမ်ရှေ့စံ ဘုရင်အလောင်းအလျားတို့တွင် အနည်းဆုံး မိဖုရား
လေးယောက်မှ (၅၀) အထိ ရှိကြတယ်။ ဘာသာရေး အယူဝါဒအရ
သေဆုံးပြီး နောင်တမလွန်တွင် ကောင်းသော ဘုံဘ၀ကို မျှော်လင့်ပြီး
နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေးအမြောက်အများကို အာဏာရှင်ဆန်စွာ လှူဒါန်း
သုံးစွဲခဲ့တယ်။ (၁၂)လရာသီ ပွဲတော်များအပြင် ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမား
သော ပွဲလမ်းသဘင်များကို ဆင်ယဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ “သီပေါမင်း”
လက်ထက် မန္တလေး နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတော် ပညာရေး အတွက်
တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန် ဘုရင့်လွှတ်တော်အတွင်းရှိ ခေတ်မီတိုးတက်
ရေးကို လိုလားသူများက တင်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ ကျောင်းဆရာများအတွက်
မပြောပလောက်သော လစာငွေအား များလွန်းသည်ဟု ထင်ကာ ပြည်သူ
လူထုရဲ့ ပညာရေး အခန်းကဏ္ဍကို ဘုရင်က မျက်ကွယ်ပြုခဲ့တယ်။
ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ ကျူးကျော်စစ် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ (၁၈၅၂)နဲ့ တတိယ
အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ ကျူးကျော်စစ် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ (၁၈၈၅) ခုနှစ် ကြားကာလ
များအတွင်း နိုင်ငံအတွင်း ရွေ့ပြောင်း အခြေချ နေထိုင်မှု အများအပြား
ရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်တဲ့ အောက်မြန်မာပြည်မှ မြန်မာဘုရင်
အုပ်ချုပ်သော အထက်မြန်မာပြည်သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူဟူ၍
ပြောပလောက်အောင်ပင် မရှိခဲ့ပါ။ မြန်မာဘုရင် အုပ်ချုပ်သော အထက်
မြန်မာပြည်မှ အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်သော အောက်မြန်မာပြည်သို့
အစုလိုက်အပြုံးလိုက် ပြောင်းရွေ့ အခြေချနေထိုင်သူ များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။
Posted by ကိုအောင် at 03:219comments
ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ပြည်ပရောက် အသိမိတ်ဆွေ လူငယ်တစ်ဦးက
ကျနော့်ကို သမိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး မေးခွန်းအချို့ မေးပါတယ်။
မေးတဲ့လူကတော့ အားတက်သရော မေးတာပါ။ ကျနော်ကတော့
ကျနော့်သိသလောက်၊ ကျနော် ဖတ်ထားသလောက်နဲ့ ကျနော့်
အမြင်တွေကို ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူ မေးတဲ့ ပထမဆုံး မေးခွန်းက
“ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီစနစ် မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လို ရောက်လာသလဲ ...”
အကြမ်းဖျင်း ပြောရရင် အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း စစ်(၃) ခါ ဖြစ်ပြီး
တနိုင်ငံလုံး ဗြိတိသျှ အင်ပါယာ လက်အောက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။
(၁) ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲ (၁၈၂၄- ၁၈၂၅)
(၂) ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲ (၁၈၅၂)
(၃) တတိယ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲ (၁၈၈၅)
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်
တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးသော အရေးအသားတွေ ရှိပါတယ်။ ဘကြီး
တော် ဘုရင်ရဲ့ နန်းတက်ပွဲကို “မဏိပူရ” နယ်စား “မဟာရာဇာ” မတက်ရောက်
လို့ မြန်မာဘုရင်ရဲ့ စစ်တပ်တွေ မဏိပူရနယ်ထဲ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်တယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် “နတ်” မြစ်ဝအနီးက “ရှင်မဖြူ” ကျွန်းကို အင်္ဂလိပ်တို့ မတရား
ကျူးကျော် ၀င်ရောက်ပြီး စစ်စခန်း ဆောက်တယ် စသဖြင့် မှတ်တမ်း တင်
ကြပါတယ်။ အဲဒီကာလက အင်္ဂလိပ်ပိုင် “အိန္ဒိယ”နိုင်ငံမှာ လဖက်ခြောက်
စိုက်ခင်းတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ကပ်လျက်မှာရှိတဲ့
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်နယ် အပါအ၀င် တရုတ်ပြည်နယ်တွေမှာ “ရေနွေးကြမ်း”
သောက်သုံးတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဈေးကွက်ကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကုန်သွယ်ရေး
လမ်းကြောင်းကို ရဖို့ မြန်မာပြည်ကို ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်တွေ စိတ်ဝင်စား
ခဲ့တာပါ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကျွန်းသစ်တောကြီးတွေ၊ ပတ္တမြားတွင်းတွေ၊
ရေနံတွင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ ကျူးကျော်စစ်
မတိုင်ခင်က အင်္ဂလိပ်တွေ လုံးဝ မသိခဲ့၊ စိတ် မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။
ပထမ အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်ပွဲ အပြီးမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ တနင်္သာရီဒေသ
တွေ မြန်မာဖက်က ဆုံးရှုံးရတယ်လို့ စာအုပ် တော်တော်များများမှာ
ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါဟာ မပြည့်စုံပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်
နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိသွားတဲ့ “စစ်တကောင်း”၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ရောက်
ရှိသွားတဲ့ “မဏိပူရ”၊ “ကချာ”၊ “အာသံ” နဲ့ “ဂျိန်းတိယ”တို့ဟာ ပထမ
အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲ မတိုင်ခင်က မြန်မာပိုင် ဒေသတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ ကျူးကျော်စစ်ဟာ “ဘကြီးတော်” ခေါ် စစ်ကိုင်းမင်း
လက်ထက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဘကြီးတော် မတိုင်ခင် သူ့အဘိုး
“ဘိုးတော်” ခေါ် ဗဒုံမင်း လက်ထက်မှာ လူဦးရေ သန်ကောင်စာရင်း
ကောက်ယူထားတဲ့ မှတ်တမ်းအရ မြန်မာပြည်မှာ လူ- ၂,၂၇၉,၀၀၀ ရှိ
ပါတယ်။ မြို့ပေါင်း ၁၈၈ မြို့၊ ရွာပေါင်း ၅၈၈၅ ရွာ ရှိတယ်လို့ မှတ်တမ်း
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲအပြီးမှာ မြန်မာတွေဖက်က ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့
ရခိုင်နဲ့ တနင်္သာရီ ဒေသအပါအ၀င် မဏိပူရ၊ ကချာ၊ ဂျိန်းတိယနဲ့ စစ်တကောင်း
ဒေသတွေမှာ ဗြိတိသျှ အင်ပါယာအတွင်း ကျရောက်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက
တိုင်းရင်းသားတွေ ၀င်ရောက် နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်
လွတ်လပ်ရေး မရခင် လအနည်းငယ် အလိုမှာ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တဲ့
အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲ စစ်တကောင်း၊ မဏိပူရ၊ ကချာနဲ့ ဂျိန်းတိယ နယ်တွေ ပါ
သွားပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆိုတဲ့ နိုင်ငံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲက ခွဲထွက်ပြီး
သီးသန့်လွတ်လပ်ရေး ယူခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ ယခင်က အရှေ့ပါကစ္စတန်
လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ပိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဆီက
အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ယူတော့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အများစု
နေထိုင်တဲ့ ဒေသတွေက ခွဲထွက်ပြီး သီးသန့် နိုင်ငံ ထူထောင်ကြတာပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးခါစမှာပဲ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဆိုပြီး ခွဲထွက်ကြ
ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မြန်မာပြည်နဲ့ ကပ်နေတဲ့ အရှေ့ပါကစ္စတန်ဒေသ
က သူတို့ကိုယ် သူတို့ “ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်” ဆိုတဲ့ အမည်ကို ယူပြီး ပါကစ္စတန်
ဆီကနေ ထပ်ပြီး ခွဲထွက်ခဲ့တာပါ။ ၁၈၂၄ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က မြန်မာပိုင်
“စစ်တကောင်း” ဒေသဟာ ယနေ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲ ပါသွားပါပြီ။
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲအပြီး ရခိုင်နဲ့ တနင်္သာရီတွေထက် အဲဒီ
စစ်တကောင်း၊ မဏိပူရ၊ ကချာနဲ့ ဂျိန်းတိယ ဒေသတွေဆီ ဗြိတိသျှ
အင်္ဂလိပ်ပိုင် တခြားဒေသတွေက လူတွေ ၀င်ရောက် အခြေချ နေထိုင်
ကြပါတယ်။ ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲပြီးခါစမှာ မြန်မာပြည် လူဦး
ရေဟာ တပြည်လုံးမှာ (၃)သန်းတောင် မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကိုလိုနီခေတ်
နှစ်(၁၀၀)ကျော် ဖြတ်သန်းအပြီး အဲဒီဒေသတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာ
နွယ်ဖွား အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိနိုင်ပါတော့တယ်။
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ စစ်ပွဲအပြီး ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ “ရန္တပို” စာချုပ် ချုပ်ဆို
ရာမှာ စကားပြန် လုပ်ခဲ့တဲ့သူက အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခရစ်ယာန်ဘာသာ
သာသနာပြု “ဆရာယုဒသန်” ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပြေငြိမ်းရေး စာချုပ် ချုပ်တဲ့
“ရန္တပို”ရွာဟာ မြန်မာဘုရင် နန်းတော်ရှိတဲ့ “အင်းဝ”နဲ့ (၄၅)မိုင်သာ ဝေး
ပါတယ်။ “အင်းဝ” မြို့ဟာ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာ
အထိကို အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်သိမ်းယူခဲ့တာပါ။ စစ် စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာ
ဘုရင် ပဒေသရာဇ်တွေဟာ ဆရာ ယုဒသန်၊ ဒေါက်တာ ပရိုက်စ်တို့
အပါအ၀င် မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံသားတွေကို
အကြောင်းမဲ့သက်သက် ဖမ်းဆီး ထောင်ချထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်
က “မလွန်မြို့”အနီး “ညောင်ပင်ဆိပ်” ရောက်လာတော့ “အောင်ပင်လယ်”
ထောင်ထဲမှာ ချုပ်ထားခဲ့တဲ့ “ဆရာယုဒသန်”ကို ထုတ်ပြီး စကားပြန်
လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတွေအပေါ် သံယောဇဉ် ကြီးမားတဲ့ ဆရာ
ယုဒသန် ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့ ရခိုင်နဲ့ တနင်္သာရီ ဒေသတွေ
သာ ဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။ “ရန္တပို” စာချုပ် ချုပ်တဲ့အချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က
မြန်မာပြည် ထက်ဝက်လောက်ကို သိမ်းထားပြီးသားပါ။ ဒီနေ့အချိန်အထိ
မြန်မာပြည်က သမိုင်းဆရာအများစုက “ရန္တပို” စာချုပ်မှာ စကားပြန်လုပ်ခဲ့
တဲ့ “ဆရာယုဒသန်”ရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို သိပ်ပြီး မဖော်ကြပါဘူး။
ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲများအတွင်း မြန်မာဘုရင် စစ်တပ်ရဲ့
စစ်ဝန်ကြီး “မဟာဗန္ဓုလ” ဟာ “ဓနုဖြူ” တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီသမိုင်းတော့ အားလုံးသိပါတယ်။ “၀က်ထီးကန်ခံတပ်” သမိုင်းတော့
သိပ် မရေးကြ မဖော်ပြကြပါဘူး။ ၀က်ထီးကန်ခံတပ် တိုက်ပွဲမှာ
မဟာဗန္ဓုလ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံတဲ့ မြန်မာဘုရင်ရဲ့ စစ်သူကြီး
မဟာသီဟသူရ အပါအ၀င် ရှမ်းစော်ဘွားတစ်ဦး၊ ရှမ်းနဲ့ ကချင်တိုင်းရင်း
သား အမြောက်အများ အသက်စွန့်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အကြီးမားဆုံး
တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ် စစ်ပွဲတွေမှာ “ခရာ”မှုတ်သံနဲ့ အချက်
ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ၀က်ထီးကန်ခံတပ်ဆီ ရှေ့ဆုံးက တက်လာတဲ့
အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က ခရာမှုတ်သံ မှားယွင်းသွားလို့ နောက်ဖက်က အင်္ဂလိပ်
အမြောက်တပ်ဟာ ကိုယ့်လူပေါ် ကိုယ်ပြန်ပြစ်မိပြီး အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်
၀က်ထီးကန်မှာ ၀က်ဝက်ကွဲအောင် ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။ မြန်မာတွေ
ဖက်က ဗိုလ်ချုပ် မဟာသီဟသူရ၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားတွေကို ဦးဆောင်
လာတဲ့ “ဗိုလ်မှူး” အဆင့်ရှိ ရှမ်းစစ်သမီး ခေါ် “ဗိုလ်မှူးမင်းသမီး”၊
လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ ထမ်းစဉ်ပေါ်ကနေ ကျဆုံးချိန်အထိ ခုခံခဲ့တဲ့
ရှမ်းစော်ဘွားကြီးတစ်ဦးတို့ အပါအ၀င် ရာနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာဘုရင့် အမှုထမ်း
တွေ အသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဖက်ကလည်း ရာနဲ့ချီတဲ့
စစ်မှုထမ်းတွေ ကျဆုံးခဲ့သလို တိုက်ပွဲအပြီးမှာ စစ်သား (၅၀)ကျော်
ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ၀က်ထီးကန် တိုက်ပွဲအပြီး မြန်မာဘုရင်
“ဘကြီးတော်” ထံ တင်ပြချက် တစ်ခုမှာ “သုံးရကုလား ငါးဆယ်ကျော်
နဲ့ လက်နက်အမြောက်အများကို အရှင့်ထံ ဆက်သပါကြောင်း” လို့
(ဓါတ်ပုံက ကိုမျိုးဝင်းဇော်ရဲ့ ဘလော့ကပါ ...)
Posted by ကိုအောင် at 21:45 11 comments
ရေးသူ- ကိုမောင်မောင်ဝမ်း (Jan 14, 2011)
ယခင် အပိုင်း(၂)မှ အဆက် …
"လွတ်မြောက်မှုဆိုတာ အလကား မရဘူး။”
လူငယ်တွေ ခဏခဏ မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေက ခေါင်းထဲကို အစီအရီ
၀င်လာတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ။၊ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာလဲ။ မြန်မာ
နိုင်ငံ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေက ဘာလို့ပေါ်ပေါက်လာရတာလဲ။ အနာဂတ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေက ဘာတွေများလဲ။….စတဲ့…
“အကို..နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ” စန်းမောင်ရဲ့အနှစ်သာရ ပြည့်ဝလှတဲ့
မေးခွန်းလေးက ကျနော့်ရင်ကို လှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့တယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ
ကျနော် သိပ်ပြောချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ့……..တော်တော်များများ
သော လူထုကြီးဟာ နိုင်ငံရေးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ သီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်တခု
“နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ အရေးပဲကွ… ပညာရှင် အသီးသီးက
ရူထောင့် အသီးသီးကနေ အဓိပ္ပါယ်တွေ… ဖွင့်ဆိုထားတာတော့ ရှိတာ
ပေါ့ကွာ..ဒါပေမယ့် ခြုံလိုက်ရင်..ဒီအဖြေပဲ ထွက်ပါတယ်…လူသား
တွေရဲ့ အရေးမှန်သမျှ နိုင်ငံရေးပဲ… နိုင်ငံရေးကို... မျက်ကွယ်ပြုခြင်း
ဟာ… လူသားတွေရဲ့အရေးကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်းပဲ… ငါ ဒီလိုပဲ
ယုံကြည်တယ်… တကယ်မှာက နိုင်ငံရေးဆိုတာ မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့
အလုပ်ပါ… နိုင်ငံရေးဆိုတာကို စက်ဆုတ်သွားအောင် ခေတ်
အဆက်ဆက် နာမည်ဆိုး နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့
တဘက်သတ် လှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် တို့(ဒို့)နိုင်ငံမှာ..နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့
အသံလေးကြားလိုက်တာနဲ့ လူတော်တော်များများက တုန်လှုပ်သွား
“သိပ်မှန်တာပေါ့ အကိုရာ..လူတော်တော်များများက… နိုင်ငံရေးဆိုတာနဲ့
ဝေးဝေးက ရှောင်ပြေးတော့တာပဲ” ကိုသွေးရဲ့ခံစားမှု စကားလုံးတွေက
တချက်တချက် ဝေ့တိုက်ခတ်လာတဲ့ အညာလေနုအေးလေးနဲ့ အတူ
“ငါ တခါက..အခု ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့က မြို့နယ် အတွင်းရေးမှုး အောင်နိုင်နဲ့
မင်္ဂလာဆောင် တခုမှာ သွားဆုံဖြစ်တယ်ကွ... မလွှဲသာလို့ ဆုံလိုက်ရတဲ့
သဘောပါ..။ သူက ငါနဲ့စကားပြောရမှာကို အတော်စိုးရိမ်နေတဲ့ အကောင်ကွ
… ဆုံကြတော့လည်း… ဟိုဟိုသည်သည် ရောက်သွားတော့တာပေါ့….
သူက ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့…..”
“သူငယ်ချင်း… ငါနိုင်ငံရေး မလုပ်တော့ဘူး… ငါ့ကိုနားလည်ပါ ” တဲ့………။
ကောင်းရောကွာ..။ ငါကလည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိတာနဲ့…”မင်းတို့ အဖွဲ့က
လုပ်နေတာတွေက နိုင်ငံရေးမဟုတ်လို့ နတ်ပြည်ရေးတွေ လုပ်နေတာလား”
ဆိုတော့…သူ ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်တော့ဘူး…။ ထပြီး လစ်ပြေးတော့တာပဲ…
အထူးသဖြင့် တို့(ဒို့)နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို စက်ဆုတ်ဖွယ်
ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ..စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်ဟာ အဓိက
တရားခံပဲ…အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ ( politics )ကို နိုင်ငံရေးလို့ အဓိပ္ပါယ် မဖွင့်
ဘေးနားမှာ ဘာမှ ၀င်မပြောသေးဘဲ ထိုင်နေတဲ့ ချမ်းမြေ့က ၀င်လာပြီး …
“ဟုတ်တယ်..ကျနော့်အိမ်မှာဆို … ကျနော်က တခါတလေ မြန်မာ့အကြောင်း
ကမ္ဘာ့အကြောင်းလေး နည်းနည်းပါးပါး ဟလိုက်တာနဲ့ အမေက ဇွတ်တား
တော့တာပဲ….။ “ဟဲ့..နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေ လာမပြောနဲ့… နင် ထောင်ထဲ
“အေးပေါ့ ...လူတော်တော်များများ သိနေတာက..နိုင်ငံရေးလို့ ပြောလိုက်
တာနဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလို့ပဲ ပြေးမြင်ကြတာ မဟုတ်လား… နိုင်ငံရေး
သမားဆို… အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးသမားပေါ့..ထောင်ထဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်
လုပ်နေရတဲ့သူ… မကြာခဏ အာဏာပိုင်တွေရဲ့အထုအထောင်း အနှိပ်
အစက်ကို ခံနေရတဲ့ သူ..သူတို့နဲ့ငါ ဆက်ဆံလိုက်ရင်… ငါတို့ပါ ဒုက္ခရောက်နိုင်
တယ်ဆိုပြီး ဝေးဝေးက.အရှောင်ခံရတဲ့သူ..ဒီလိုတွေပဲ မြင်နေကြတယ်…
ဒီအမြင်တွေကို ဒီနေ့လူငယ်ထုကြီးက ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ လိုတယ်ကွ..”
ကျနော်ထင်တယ်….” စန်းမောင်က စကားပြောနေရင်းက..မျက်လုံးကို
တခြားနေရာဆီ ပြောင်းကြည့်ရင်းက…၊ အားလုံးကလည်း ဦးတည်ကြည့်
လိုက်ကြတယ်…..။ ထက်အောင်….ပင်နီတိုက်ပုံ နဲ့ ကချင်လုံချည်နဲ့ကို
စမတ်ကျကျ ၀တ်ဆင်ပြီး ရောက်လာတယ်။ ကျနော် သူ့ကိုကြည့်ပြီး
တချက်ပြုံးမိလိုက်တယ်…..။ ထက်အောင်က မလုံမလဲ အမူအရာနဲ့...
“မဟုတ်ပါဘူးကွာ..မင်းကို..သဘောကျလို့ပါ..။ တချိန်က ထက်အောင်နဲ့
လုံးလုံးခြားနားသွားလို့ပါ..။တချိန်က ငါမြင်ဖူးတဲ့ ထက်အောင်က …ဆံပင်က
ဘာရောင်တွေ ဆိုးထားမှန်းမသိဘူး။ ဖွာလန်ကျဲလို့...။ နားမှာကလည်း
ကျားကျား ၀တ်ဆင်တတ်တဲ့..မင်းကို..အခုမြင်ကွင်းနဲ့ကြည့်ပြီး လေးစားသွားလို့ပါ”
“ ဒီတခါတော့..ကျနော်လဘက်ရည်ဖိုး ရှင်းပါ့မယ်ဗျာ”
အားလုံးက လှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့..”စားကြ..မှာကြ..” ဆိုတဲ့ ဟန်တွေ လုပ်ပြကြရင်း
“အကို ..ဟိုနေ့က ရှင်းပြခဲ့တဲ့..ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပေါင်းစပ်တန်ဘိုးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး
အယူအဆနဲ့တွဲသုံးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ဆက်ရှင်းပေးပါဦး ”
“ဒီလိုကွ…မျက်မှောက် ကမ္ဘာကြီးမှာ..ဒီမိုကရေစီကို နိုင်ငံရေးပုံစံ ၃ မျိုးနဲ့တွဲ
သုံးလာတာကို တွေ့ရတယ်..။ ဒါတွေကတော့..(တစ်)..လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီ
(liberal Democracy)… (နှစ်)မလွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ (illiberal Democracy)။
(သုံး)အစ္စလမ်မစ် ဒီမိုကရေစီဆို ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်…။
ငါ စရှင်းပေးမှာက မလွတ်လပ်တဲ့… ဒီမိုကရေစီ အမျိုးအစား။ အခု စစ်အစိုးရ
ကပြောနေတဲ့ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မလွတ်လပ်တဲ့
ဒီမိုကရေစီအမျိုးစားပဲ။ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ။
နောက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီပုံစံတွေဟာ
“လက်ဝဲ ဆိုရှယ်လစ်၊ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာ..ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို …
“လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကိုတော့ ရွေးချယ်
ခဲ့တယ် ဒါကို ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ ပြောကြတာပဲ….။ ဒါပေမယ့်
လူထုဆန္ဒ စစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ ဘာကိုမှ ရွေးချယ်လို့ မရတာတော့ သေချာတယ်။
တို့(ဒို့)နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၆-နှစ် အုပ်စိုးသွားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်
ပါတီကိုပဲ ပြန်ကြည့်ကွာ။ မင်းတို့ကငယ်သေးတော့ ဘယ်သိပါ့မလဲ…။
လေးနှစ်တကြိမ် ရွေး ကောက်ပွဲကျင်းပတော့ အတိုက်အခံပါတီဆိုတာ မရှိဘူး
သူတို့ပါတီက တိုက်ရိုက်ချပေးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြိုင်ဘက်မရှိ
လူထုက မဲပေးရတာ…လူထုမှာ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိဘူး။ သဘောကတော့
လူထု စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီကို
လက်တလုံးခြား လှည့်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လူထုက သွား အသိအမှတ်
ပြုရတဲ့သဘောလောက်ပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၆-နှစ်အကြာ ၁၉၈၈
“အဲဒီပါတီဟာ… ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရသလား”
ချမ်းမြေ့က ရေနွေးခရားထဲက ရေနွေးကိုထည့်ရင်း မေးလိုက်တယ်။
“ငါ ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ..။ လူထုက ရွေးချယ်ပေးရတယ်ဆိုကတည်း
က..ဒီမိုကရေစီပုံစံလို့ ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တာပေါ့.. ဒါပေမယ့် တကယ့်
ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရမှာ..လွတ်လပ်တဲ့ သဘောဆန္ဒဆိုတာပါတယ်။
အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ..တပါတီစနစ်ကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတချို့မှာ လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲ
တော့ လုပ်ပါရဲ့ တကယ်ရော လူထုဆန္ဒပါရဲ့လား။ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်
နိုင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ရှိရဲ့လား..သေသေ ချာချာ လေ့လာကြည့်တော့ မရှိဘူး
လုံးဝ မရှိဘူး… လူထုကို အကြောက်တရားတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးပြီး..သူတို့ဖြစ်ချင်
တာတွေကို စေခိုင်းတဲ့ အနေအထားတွေပဲရှိတယ်။ ဒါကို ဒီမိုကရေစီ ရှိသယောင်
အသံကောင်း ဟစ်ထားတယ်..။ ဒါကိုပဲ သူတို့က ဒီမိုကရေစီလို့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။
အကို ပြောခဲ့သလိုပဲ..။ ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကို ဒီမိုကရေစီလို့ သတ်မှတ်ရင်တောင်မှ
မလွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အမျိုးစားသာ..ဖြစ်တယ်”
“အဲဒီ..မလွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပုံစံ အမျိုးစားကို..ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ ကျင့်သုံး
လဲ အကို ” စန်းမောင်က လက်ထဲမှာ ဘော့ပင်ကို ကိုင်ထားရင်း သူ့နုတ်စာအုပ်
ထဲကို ရေးမှတ်မလို့ လုပ်ရင်းက လှမ်းမေးတယ်။
“အင်ဒိုနီးရှား၊တရုတ်၊ကျူးဘား၊ဗီယက်နမ်၊..ဒါ မင်းတို့မြင်သာတဲ့ နိုင်ငံတွေကို
“လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးရတဲ့ ( ဒီမိုကရေစီ)ပုံစံကို အရောင်ပြ
ကျင့်သုံးတယ်ကွာ။ ပြီးရင် လူတဦးတယောက် ဒါမှမဟုတ် တစ်ပါတီ အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုကနေ တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို ထင်သလိုကျင့်သုံးတော့
တာပဲ။ လူထုဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်ရေး အပြည့်အ၀ပေးဖို့ မရင့်ကျက်
သေးဘူးဆိုတာ သူတို့အမြဲသုံးနေကျ လက်သုံးစကားပဲ။ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမို
ကရေစီနိုင်ငံတွေက အားနည်းချက်တွေကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး အပြစ်တွေပဲ
ပြော… လူထုကို ထင်ရောင်မှားတွေဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားလေ့ရှိတယ်”
“အဲဒါပြောတာပေါ့အကိုရာ ဒီမိုကရေစီ မရင့်ကျက်သေးလို့ ဆိုပြီး လွတ်လပ်မှု
မပေး။ မလွတ်လပ်လို့ ဒီမိုကရေစီက ရင့်ကျက် မလာ..။ ဘာ သွားယုံရတော့မလဲ”
လူငယ်တွေကို လျှော့တွက်လို့ မရဘူးဆိုတာ ယနေ့စစ်အာဏာရှင်များနဲ့ နိုင်ငံရေး
သမားဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို သိစေချင်တယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ဟာ IT နည်းပညာ
ခေတ်၊ အကြောင်းအရာတခုပေါက်ထွက်လာပြီဆို..ချက်ကနဲ ကမ္ဘာပတ်သွားတတ်
တဲ့ခေတ်မှာ… ဟောင်းနွမ်း ဆွေးမြေ့နေတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေနဲ့
လူထုကို ချုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်..အမှားကြီးမှားသွားပါလိမ့်မယ်….။
“နောက်တခုက လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပုံစံ ….liberal (လစ်ဘရယ်) အယူအဆ
နဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးထားတာ..လစ်ဘရယ်နဲ့ ကွန်မြူနစ် အယူအဆ
တွေအကြောင်း နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ဆွေးနွေးတာပေါ့။ လက်ဝဲ ဆိုရှယ်လစ်နဲ့
ကွန်မြူနစ်တွေ သမုတ်တာကတော့ အရင်းရှင်စနစ်အခြေပြု ဒီမိုကရေစီပုံစံပေါ့ကွာ။
ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက တချို့ကိုပြောရရင် အမေရိကန်အပါဝင်
ဥရောပ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ထိုင်း စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီ
တနည်းအားဖြင့် လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်။ လူထုဟာ မိမိ
စိတ်ကြိုက် အစိုးရကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်၊ဖြုတ်ချခွင့်ရှိတယ် တရားဥပဒေဘောင်
အတွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်ဝရှိတယ်..အခုကမ္ဘာကြီးမှာ အောင်မြင်နေတဲ့
ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ လစ်ဘရယ်က ဆင်းသက်လာတဲ့ စီးပွားရေး
တစ်ပါတီ ကြိုးကိုင်စနစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားနေကြတဲ့ တရုတ်လို၊ ဗီယက်နမ်လို
ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာတောင်မှ သူတို့အယူအဆနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့
ဈေးကွက်စီးပွားေးရးပုံစံကို လက်ခံကျင့်သုံး လာတာကတော့ထူးခြားချက်
“အကို ကျနော်သိပ်မရှင်းလို့ မေးချင်တယ်….ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ
ဘာလဲဗျ..” ဒီတခါတော့ ထက်အောင်ရဲ့စူးရှလှတဲ့မေးခွန်းလေးက ကျနော့်ရင်ထဲ
ကို ထိုးဖောက်သွားစေခဲ့တယ်…..ကျန်လက်စ လဘက်ရည်ကို တကျိုက်မော့
“လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းဝယ်တဲ့ စီးပွားရေးပုံစံပေါ့ကွာ….အထူးသဖြင့်
ပုဂ္ဂိုလ်အခန်းကဏ္ဍကို ဦးစားပေးပြီး..လူတိုင်းဟာ..လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယှဉ်ပြိုင်
ရောင်းဝယ်နိုင်ရမယ်… စီးပွားရေး ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို တရားဥပဒေဘောင်အတွင်း
က စိတ်ကြိုက်စီမံနိုင်ရမယ်...လို့ဆိုတယ်….။အခု နအဖက ပြဌာန်းထားတဲ့ စီးပွား
ရေးဦးတည်ချက်ဆိုတာမှာ…နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့
လက်ဝယ်မှာရှိရမယ်လို့လည်းဆိုတယ် ပြီးတော့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုလည်း
အစိုးရဆိုတာ အခွန်ပဲ ကောက်စားရတဲ့အမျိုးကွ။သူက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
မှန်သမျှကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဆိုတဲ့ နောက်မှတော့
ဘယ်ကလာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့မှာလဲကွာ ပုဂ္ဂိုလ်
တွေက ဘယ်လိုလုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယှဉ်ပြိုင်လို့ရတော့မလဲကွာ…
နောက်တခါ တော်တော်ကြောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တခုရှိသေးတယ်..ကုန်ဈေးနှုန်း
ကို အာဏာနဲ့ထိန်းချုပ်တာလေ။ အဲဒါ ဘယ်တော့မှ မရဘူး၊ မှတ်ထား။
ကုန်ဈေးနှုန်းဆိုတဲ့ အမျိုးက ဈေးကွက်အပေါ်မှာပဲ တည်မှီနေတာ…
အခြေအနေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်နေတာ..ဒါကို အာဏာနဲ့
ထိန်းချုပ်လို့ရပါ့မလားကွာ..ရလည်းခဏပေါ့။ တကယ်ခေတ်မှီတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ
လူထုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအတွက် အစိုးရကိုယ်တိုင်က နှစ်နဲ့ချီပြီး စီမံ
ထားရတာ။ ဥပမာ… အမေရိကန်မှာ လောင်စာဆီဈေးတွေ တက်တယ်ကွာ…
အဲဒါကိုလူထုက မကျေနပ်လို့ လူထုက ဆန္ဒလည်းပြရော..အစိုးရက ဘာလုပ်
သလဲဆိုတော့..သူတို့ သိုလှောင်ထားတဲ့ လောင်စာဆီတွေကို ဈေးအရမ်းချပြီး
ရောင်းပစ်လိုက်တာ….နောက်တော့ လောင်စာတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေကပါ ဈေးကို
အစိုးရနှုန်းနဲ့အတူတူ လိုက်ချပေးလိုက်ရတော့ ဈေးတွေ ကျကုန်တော့တာပေါ့…
ဆီးလား လုပ်တယ်ကြားဖူးလား…. ဒါ့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကို လေ့လာလိုက်မယ်
ဆိုရင် ဈေးကွက်ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေထက် ဈေးကွက်ကို ပြိုင်ဆိုင်ခွင့်
ပေးတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပိုချမ်းသာ အောင်မြင်ကြတာ လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်”
“ဟုတ်တယ် အကိုရ... မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု လုပ်တော့မယ်
ဆိုရင်တောင်မှ..ဟိုကပိတ်..ဒီက ကာနဲ့ လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်က..ခပ်ရှားရှားပါ။
သူတို့နဲ့ ပနံသင့်တဲ့လူတွေလောက်ပဲ..စီးပွားရေးကို ကောင်းကောင်း ထူထူ
ထောင်ထောင် လုပ်နိုင်ကြတာ။ ကိုယ့်အရည်သွေး..အရည်အချင်းပေါ် တည်မှီပြီး
လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်ရဦးမလဲ မသိဘူးနော်”
စိတ်ပျက်လက်ပျက်အသံနဲ့ ညည်းညူလိုက်တဲ့ စန်းမောင်ကို ကြည့်ပြီး ကျနော့်ရင်ထဲ
“စီးပွားရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေမပေးဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် ဈေးကွက်စီးပွားရေးပုံစံကို
အကောင်ထည်ဖော်မလဲ မသိဘူး ငါတော့ လိုက်မမှီတော့ဘူး။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ
တွက်ခြေ အကိုက်ဆုံးစီးပွားရေးက အာဏာပိုင်နဲ့ပင်းလုပ်တဲ့ အလုပ်ကလွဲလို့
“နောက်တခုက အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအယူအဆကို ဒီမိုကရေစီနဲ့တွဲဘက်ကျင့်
သုံးတယ်… ဥပမာ တူရကီလိုနိုင်ငံမျိုးပေါ့ ဒါကတော့ တို့နိုင်ငံနဲ့ အလှမ်းဝေးပါတယ်
ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငါ အဓိကပြောချင်တာက
ဒီမိုကရေစီဆိုတိုင်းလည်း မပြီးသေးဘူးဗျ။ သူ့ရဲ့ပေါင်းစပ်တန်ဘိုး ဘာနဲ့သွား
မှာလဲ ဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာပုံစံက လိုသေးတယ် ဆိုပါစို့ ခုနေ ..” ကျနော်တို့
လိုချင်တာ ဒီမိုကရေစီပါ ” ဆိုပြီး ထတောင်းဆိုမယ်ဆို..နအဖက” ကျုပ်တို့
ခင်ဗျားတို့ကို ဒီမိုကရေစီပေးပါမယ်” လို့ပြောပြီးပြီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတောင်
မှ ပြဌာန်းပေးပြီးပြီ ဘာလာကြောင်တာလဲဆို ဘာပြန်ဖြေကြမလဲ။ တကယ်တော့
အားလုံးပြောနေကြတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ
ပုံစံကို ပြောတာပါ။ ဒါကို သဲကွဲဖို့လိုတယ် လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း
သူ့မှာ ဘောင်ရှိပါတယ်။ ငါမင်းတို့ကို တခုမေးချင်တယ် လွတ်လပ်မှုကြောင့်
ရရှိလာတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ မလွတ်လပ်မှုကြောင့် ရလာမယ့် ဘေးထွက်
ဆိုးကျိုး ဘယ်ဟာက ပိုဆိုးမယ် ထင်လဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့
ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ လွတ်လပ်မှု့တွေကို ဟန့်တားပြီး အာဏာရှင်စနစ်
အုပ်ချုပ်ရေးကိုတော့ ငါ မကြိုက်တာအမှန်ပဲကွ ”
“ဒါပေါ့ အကိုရာ..နိုင်ငံရေးစနစ်ပုံစံတွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာ
အနည်းနဲ့အများရှိနေကြမှာပါပဲ။ ဒါကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးနေမယ်ဆို မလုပ်လို့မဖြစ်
မဖြစ်လို့မလုပ်ဆိုတဲ့ အဆိုးသံသရာထဲမှာပဲ လည်နေဦးမှာပဲ”
ကိုသွေးရဲ့ စကားအဆုံး သတိထားကြည့်လိုက်တော့ စန်းမောင်ပုံစံက
တခုခုကို သိပ်မရှင်းတဲ့ပုံ မျက်မှောင်ကို ကုတ်ရင်း စဉ်းစားနေဟန် ရှိနေရာကနေ …
“အကို ကျနော်တို့အတွက် သိပ်သိချင်တဲ့ အရာကိုလည်း ပြောဦးလေ အကို
မေ့နေပုံရတယ် ခုန အကိုရှင်းပြသွားတဲ့အထဲက လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီ
(တနည်းအားဖြင့်) လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာလဲ ”
“ငါရှင်းပြမလို့ပါ..ဒီလိုကွ… လစ်ဘရယ်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက လက်တင်ဘာသာစကား
( Liber ) ဆိုတာကနေ ဆင်းသက်လာတာ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ လွတ်လပ်ခြင်း
( Free ) လို့အဓိပါယ်ရတယ်။ လစ်ဘရယ်ရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်တွေကတော့
( ၁ ) လွတ်လပ်မှု့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဘိုးထားခြင်း။
( ၂ ) လူပုဂ္ဂို တဦးချင်းအပေါ်အခြေခံသည့် ၀ါဒ။
( ၃ ) အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်သောအစိုးရများအားဖော်ဆောင်ခြင်း။
( ၄ ) စီးပွားရေးစနစ်ကို လူအဖွဲ့အစည်းကလိုအပ်သလို ပြဌာန်းနိုင်ခွင့်ကို
လမ်းဖွင့်ပေးရေး နှင့် အစိုးရကထိန်းချုပ်မှု့ကင်းဝေးရေးဆိုတာတွေပဲ …
လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လစ်ဘရယ်ဝါဒနဲ့ ဒီမိုကရေစီအယူအဆကို
ပေါင်းစပ်ထားတာပေါ့…နောက်တချက်က လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံ
သဘောတရားတွေကတော့ လွတ်လပ်မှု၊ ညီမျှမှု၊ ချစ်ကြည်မှု၊ လူမှုရိုင်းပင်း
စန်းမောင်က ပျာယိပျာရာနဲ့ လှမ်းတားလိုက်တော့မှ..
“ဆောရီးကွာ စန်းမောင် ။ငါကလည်း ပြောချင်ဇောနဲ့ လောကြီးသွားတယ်”
စန်းမောင်က လက်ကာပြပြီး… “ရပြီ အကို ....ဆက်ပြောပါဦး”
“အရေးကြီးဆုံးတချက်ကတော့… ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်ရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး
လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတွေဟာ…လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီ တနည်းအားဖြင့် လစ်ဘရယ်
ဒီမိုကရေစီမှာပဲရှိတဲ့ တန်ဘိုးပဲကွ..ဘယ်စနစ်၊ ဘယ်အယူအဆမှာမှမရှိဘူး…”
“တန်ဘိုးရှိလိုက်တဲ့..အရာတွေအကိုရာ.. အကိုပြောသွားတဲ့အထဲမှာ လစ်ဘရယ်
ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတာ အမေရိကန်၊ ဥရောပ အပါအ၀င် အာရှမှာဆို
စန်းမောင်က ..မေးမေးမှတ်မှတ် လုပ်ရင်းက ၀င်ထောက်လိုက်တော့…
“ဟုတ်တယ် နောက် လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီကို အကောင်ထည်ဖော်နေတဲ့
အထဲမှာ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးရား တို့အပြင်အများကြီးရှိသေး
တယ် ဒီမိုကရေစီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အားလုံးနီးပါးသောနိုင်ငံတွေဟာ လွတ်လပ်
တဲ့ဒီမိုကရေစီ (လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ) တခါ မင်းတို့ငါတို့အများသူငါပြောနေကြ
တဲ့ စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ အဲဒီကို ဦးတည်သွားနေကြ
တာပါကွာ၊ တခြားဟာမဟုတ်ပါဘူး…” ပြောပြောဆိုဆို ကျနော် နာရီကို
ကြည့်လိုက်တော့ အလုပ်ကိစ္စတခုဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်နီးနေတာ အခုမှ
သတိထားမိတော့တယ်….။ “ကဲ..ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ… ရပ်ထားလိုက်
ရအောင်…. နောက်နေ့မှ ဆက်ကြတာပေါ့….”
အညာမြေရဲ့ လှပတဲ့ ညနေခင်းလေး တခုကို ကျနော်တို့ အကျိုးရှိစွာ ကျော်ဖြတ်
လူငယ်တွေသိချင်သော အကြောင်းအရာများကို ကျေကျေနပ်နပ် ပြောပြခွင့်ရခဲ့
သောကြောင့်…..ဒီလိုအချိန်၊အခြေနေမျိုးတွေ များများရှိပါစေ...လို့တောင့်တရင်း …။
အပိုင်း ( ၄ ) ဆက်ပါဦးမည်။
Posted by ကိုအောင် at 19:234comments
Posted by ကိုအောင် at 19:46 61 comments
ယခင် အပိုင်း(၂)မှ အဆက် …
ရွာဥက္ကဋ္ဌကို မြို့ပေါ်အထိ လိုက်ခေါ်တဲ့ ကိုထွန်းရွှေတို့ ကိုတင်စန်း
တို့ ပြန်အလာကို တစ်ရွာလုံး မျှော်နေကြပါတယ်။ နေ မ၀င်ခင် ရောက်
လာကြပါစေလို့ သူတို့အားလုံးရဲ့ တီးတိုးဆုတောင်းသံတွေ တဖြေးဖြေး
ချင်း တိမ်ဝင်သွားသလို သူရဇ္ဇ နေမင်းကလည်း တဖြေးဖြေးချင်း ရိုးမ
အနောက်ထဲ ငုပ်လျှိုးသွားပါပြီ ….။
ရွာလယ် လမ်းမတလျှောက် လူကြီးလူငယ်တွေ စုရုံးစုရုံးဖြင့် ဟိုအိမ်ရှေ့
စုလိုက်၊ နောက်တစ်အိမ်ရှေ့ ပြန်စုလိုက်နဲ့ အလုပ်များနေကြပေမယ့်
ကလေးငယ်တွေကတော့ အပူအပင် ကင်းမဲ့စွာ ပြေးလွှားဆော့ကစား
နေကြပါတယ်။ ကျွဲနွား အဌား ထိန်းကျောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သော
ကိုရင်သာဂိတို့ ညီအကိုနှစ်ယောက်ကတော့ အရင်နေ့တွေထက် မိုး
မချုပ်မီ စောစောစီးစီး ကျွဲတွေ နွားတွေကို ရွာထဲသို့ မောင်းသွင်း လာကြ
“ကိုညို၊ တော်ကတော့ စောစောစီးစီး မူးနေပြီလား၊ အငယ်နှစ်ယောက်ကို
“ထွေးရီတို့ မိုးပြာတို့ ရေခတ်နေတာ မပြီးသေးဘူးလား၊ သာဂိတို့တောင်
“ဒွေးလေးတင်၊ တော့်သားတွေကို ကြည့်ပြောအုန်းနော်၊ နတ်မယုံဘူး ဘာဖြစ်
တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အဘဖိုးဆောင်နဲ့ ငြင်းခုန်နေတယ် …”
“အရီးကလည်း လုပ်ပြန်ပြီ၊ ကျုပ်တို့က အခြောက်တိုက် ကြောက်နေရမှာလား …”
“ဟဲ့ ကောင်လေးတွေ နင်တို့ မယုံရင် နင်တို့ အပေါက်ကို ပိတ်ထားကြ၊
… အရှင်ကြီးတို့ရှင် ကလေးစကား ခွေးစကား အရူးစကားများ အမှတ်မထား
ဗွေမယူကြပါနဲ့၊ အမိုက်အမဲများရှိရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ ….”
ကွပ်ပျစ်ပေါ် အကြမ်းအိုး လာချပေးတဲ့ မိကျော့ကို ကြည့်နေရင်းကနေ
စိုးထိုက်’ မေးလိုက်ပုံက … “သူတို့ ပြောနေတာကို ကျနော်တော့ သိပ်
နားမရှင်းဘူး ကိုထွန်းကြိုင်၊ ရွာတော်ရှင်တို့ ကွင်းပိုင်တို့ ဆိုတာ ဘယ်သူ
(ကိုထွန်းကြိုင်) မောင်စိုး တိုးတိုးပြောပါဟ၊ ကျေးရွာတိုင်းမှာ ရွာတော်ရှင်
နတ်နန်းဆိုတာ ရှိတယ်၊ အဲဒီနတ်ကို ရွာတော်ရှင်လို့ ပြောကြတာ၊ ကွင်းပိုင်
ဆိုတာက ရွာအပြင် လယ်ကွင်း စိုက်ကွင်းကို စောင့်ရှောက်တဲ့ ကွင်းပိုင်နတ်
ကို ပြောတာ၊ လူတွေမဟုတ်ဘူး နတ်တွေကွ …။
(စိုးထိုက်) နတ်တွေကလည်း များလိုက်တာဗျာ …။
(ကိုထွန်းကြိုင်) သူ့ဒေသ သူ့ဓလေ့ပေါ့၊ ရွာက လူတွေရှေ့မှာတော့ မယုံ
မကြည်တဲ့ သဘောမျိုး မပြောမိစေနဲ့နော်၊ သူတို့ မကြိုက်ဘူး …။
(မိကျော့) တော်တို့ မြို့ပေါ်မှာလည်း နတ်ကန္နားပွဲတွေ နတ်ကတော်တွေ
အများကြီးပါနော်၊ တော်တို့လည်း လိုတာရှိရင် အဖြစ်သဲလိုက်ပုံများ မသိ
တာလိုက်လို့ … ”
(စိုးထိုက်) သြော် ဟုတ်လား၊ ကျနော်လည်း ဒီရွာကို အလာ လမ်းမှာ နတ်
တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံမိလို့ ဆုတွေတောင် တောင်းခဲ့သေးတယ် …။
(မိကျော့) ဘာ နတ်လဲ …။
(စိုးထိုက်) မျှားနတ်မောင်လို့ ပြောတာပဲ …။
(မိကျော့) အကောင်းအောင့်မေ့လို့ စကားပြောမိပါတယ်၊ တော်က
စကားမဆုံးခင် မပြေးရုံတမယ် ထွက်ခွာသွားတဲ့ မိကျော့ကို ကြည့်ရင်း
တဟားဟားဖြင့် ဟားတိုက်ရယ်မောနေသော ကိုထွန်းကြိုင်ရဲ့ ရယ်သံများ
ကြောင့် စိုးထိုက်တစ်ယောက် ညစား စားဖို့ပင် မေ့လျှော့နေဆဲ ….။
ညဉ့်ဦးပိုင်းတွင် ကိုထွန်းကြိုင်ကြီး ရှင်းပြနေသော လယ်တစ်ဧက ပျမ်းမျှ
စပါး ဘယ်နှစ်တင်း ထွက်တယ် .. ဆိုသော စကားများကို ခြင်ထောင်ထဲ
က နားထောင်နေရင်း ဘယ်လို အိပ်ပျော်သွားမှန်း မသိ။ ရုတ်တရက်
ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အော်ဟစ်သံလိုလို ရန်ဖြစ်သံလိုလို အသံများကြောင့်
စိုးထိုက် လန့်နိုးလာပါတယ်။ ခြင်ထောင်ထဲက ထွက်ထွက်ချင်း မျက်လုံး
ထဲ တိုးဝင်လာတဲ့ ဖယောင်းတိုင် မီးရောင်ကြောင့် ကျိမ်းစက်စက် ဖြစ်နေ
ဆဲပါ။ “ကိုထွန်းကြိုင်၊ ကျနော့် နားထဲမှာ အော်သံတွေ ကြားလိုက်
“ဟုတ်တယ် မောင်စိုး၊ ငါတို့ အားလုံး နိူးနေတာ သိပ်မကြာသေးဘူး၊
မင်းကို အားနားလို့ မနိူးဖြစ်တာ …”
အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဖယောင်းတိုင်မီးတွေ အောက်လင်း
မီးအိမ်တွေနဲ့ ထိန်ထိန်တောက်နေပါတယ်။ မျက်စောင်းထိုး ခြံရှေ့မှာ
လူတွေ အုပ်စုလိုက် ပြောဆိုနေကြသည်က ….
“ငငြိမ်း မင်းဟာက ဟုတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လားကွာ၊ အမူးလွန်ပြီး ပေါက်ပန်း
လေးဆယ်တွေ လျှောက်မပြောနဲ့နော် …”
“ကိုရင်ငြိမ်း၊ ခင်ဗျား မနောက်နဲ့နော်၊ ညကြီးမင်းကြီးဗျာ …”
“ဟေ့လူတွေ၊ ကျုပ် သောက်ထားတာ မှန်တယ်၊ မူးနေတယ်ဆိုပြီး …ျီးကျွေး
ကြည့်ပါလား ဘယ်သူမှ မစားဘူးဗျ၊ ခင်ဗျားတို့ကို နောက်နေတာ မဟုတ်
ဘူး၊ တကယ်ပြောနေတာ …”
“ကဲ့ကဲ့ ငြင်းမနေကြပါနဲ့ ဘယ်က ဘယ်လို စဖြစ်သလဲဆိုတာ ပြောပြပါအုံး …”
“တရေးနိုးလို့ အလေးသွားချင်တာနဲ့ အိမ်သာဖက် ဆင်းလာတာ၊ အိမ်သာ
တက်နေရင်းနဲ့ လေတိုက်သံတွေ တဝေါဝေါ ကြားနေရတယ်၊ ဒါနဲ့ အိမ်သာက
ဆင်းတော့ ဓါတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်လိုက်တာ …. ကျုပ်အိမ်နောက်ဖေးမှာ ဘာမှ
မရှိတော့ဘူးဗျို့၊ ကြောက်စရာကြီးဗျာ …”
“ဟာ ဒီကောင် အဟုတ်မှတ်လို့ နားထောင်နေတယ်၊ မင်းအိမ်က ရွာအစွန်
မှာလေ၊ မင်းအိမ်နောက်ဖေးမှာ အခင်းတွေပဲ ရှိမှာပေါ့ သောက်ရူးရဲ့ …”
“တော်တော်ခက်တယ် လူဗျာ …”
“ကိုညို၊ ကျုပ်ပြောနေတာက ကျုပ်အိမ် နောက်ဖေးမှာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး
လို့ ပြောနေတာ၊ ခင်ဗျားက ဘာနားလည်လို့ ဘာဝင်ပြောနေတာလဲ …”
“ဟဲ့ကောင် မောင်ငြိမ်း၊ မင်း အမူးမပြေသေးဘူးလား၊ မင်းအိမ်က ရွာအစွန်
မှာ မင်းအိမ် နောက်ဖက်မှာ အခင်းတွေပဲရှိတယ် … ဟင်း …”
“မဟုတ်ဘူးဗျ … မဟုတ်ဘူး၊ အခု ကျုပ်အိမ်ရဲ့ နောက်ဖက်မှာ ချောက်ကမ်းပါး
ကြီး ဖြစ်နေတယ်၊ ဘာအခင်း ဘာအပင်မှာ မရှိတော့ဘူး၊ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့
အောက်ကို ထိုးကြည့်တော့ ကျားဟိန်းသံတောင် ကြားလိုက်ရသေးတယ် …”
“ဟေး … ဟားဟားဟား …”
ကိုမောင်ငြိမ်း ပြောတဲ့စကားကို နားထောင်နေသူအားလုံး တ၀ါးဝါးနဲ့
ပွဲကျနေပါတယ်။ သူ ပြောတဲ့စကားအပေါ် ရယ်မောနေသူတွေကို ကြည့်ပြီး
ကိုမောင်ငြိမ်းရဲ့ စိတ်မရှည်တော့တဲ့ လေသံဟာ တဖြေးဖြေး မြင့်လာ
ပါတယ်။ မိကျော့အကို ကိုမျိုးသိမ်းက ကိုမောင်ငြိမ်းရဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့
ကလေးငယ်တွေကို ဟုတ် မဟုတ် ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး မေးမြန်းနေ
“မခင်ဝိုင်း၊ ခင်ဗျား ယောက်ျား ပြေးတာနဲ့ ခင်ဗျားတို့ တစ်မိသားစုလုံး
အိပ်ယာက ထပြီး ပြေးလာကြတာလား …”
“မသိပါဘူးတော်၊ ဒင်းက အသံနက်ကြီးနဲ့ အော်ပြီး ပြေးတော့၊ ကျုပ်တို့
လည်း အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သူ့နောက်ကနေ ပြေးလိုက်မိတာ …”
အိမ်ပြန်ပြီး အိပ်ဖို့ အားလုံးက ဘယ်လို ဖျောင်းဖျဖျောင်းဖျ ကိုမောင်ငြိမ်း
က လက်မခံပါ။ ကိုမောင်ငြိမ်းတို့ မိသားစုကို သူတို့နေအိမ်ဆီ လိုက်ပို့
ဖို့ လူကြီးအချို့ သွားတော့မယ့်ဆဲဆဲ ရွာတောင်ပိုင်းက ဆူဆူညံညံ
“ဘာတွေဖြစ်ကြပြန်ပြီလဲ မသိဘူး …”
“ဒီကောင်တွေ ကာလသားဟင်း ချက်စားပြီး ရန်ဖြစ်နေပုံရတယ် ...”
သိပ်မကြာခင် သူတို့ဆီကို လက်နှိပ်ဓါတ်မီးရောင် တ၀င်းဝင်းဖြင့် လူကြီး
လူငယ် အများအပြား ရောက်လာကြပါတယ်။ ဆယ်အိမ်ခေါင်း ရှင်းပြပုံက …
“အဘစံရေ၊ ဒီကောင် ဖိုးချစ်ပေါ့ ညကြီးမင်းကြီး ကျနော့်အိမ်ရှေ့ကနေ
တကျော်ကျော် လှမ်းခေါ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးကြည့်တော့ ညတရေးနိုး
အပေါ့အပါး သွားဖို့အဆင်း သူ့အိမ်အောက်က နွားပြာကြီးက သူ့ကို
စကားလှမ်းပြောလို့တဲ့ဗျာ၊ ပထမတော့ ကျနော်တို့လည်း မယုံဘူး၊ သူ့တို့
ခြံထဲလိုက်ကြည့်ပြီး လှည့်အပြန် ဘာကြားလိုက်ရတယ် အောင့်မေ့သလဲ …”
“မင်းတို့ ညကြီးမိုးချုပ် ငါ့ကို လာနောက်နေတာလား မောင်မြ …”
“ကိုစံ၊ တော်ကလည်း သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုဆုံးအောင် နားထောင်ပါအုံး၊
ဘယ်သူက ညကြီးမင်းကြီး လာနောက်မှာလဲ …”
“ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း ကြားရတာ မဟုတ်ဘူး အရီးရဲ့၊ ကျုပ်တို့မိသားစု
ရော၊ ဖိုးချစ်တို့ တစ်အိမ်လုံးရော၊ ငသိမ်းတို့ပါ ကြားလိုက်ရတာဗျ …”
“ဟေ့မောင်တွေ ကြည့်လဲ ပြောပါအုံး၊ နွားက လူစကား ပြောပါ့မလား …”
“နွားပြာကြီးက ဘာတွေ ပြောလဲဗျ …”
“မောင်မြရေတဲ့ … မင်းအမေ မစောကို ပြောလိုက်ပါကွာ၊ မင်းတို့ရှင်ပြုတုန်း
က ငွေမလည်လို့ ငါ့ဆီမှာ လာပေါင်ခဲ့တဲ့ နွားလေးကို မောင်ပိုင်စီးမိလို့
အဲဒီအစွဲအလန်းတွေကြောင့် ငါ အခု နွားဖြစ်နေပြီတဲ့ …”
“ဟေး … ဟုတ်လား”
“အဲဒီနွားက အခုထိ လူစကား ဆက်ပြောနေသေးလား …”
“နံဘေးအိမ်က လူတွေပါ နိုးလာပြီး ထပ်ရောက်လာတော့ မပြော
“ဖိုးချစ်ဆို အဲဒီနွားကြီးကို ဖက်ပြီး ငိုလိုက်တာဗျာ၊ အဖေ … အဖေ
ဆိုပြီး၊ ကျုပ်လည်း အိမ်မက်များ မက်နေသလားလို့ ကိုယ့်လက်တောင်
ပြန်ကိုက်ကြည့်သေးတယ် … ဒီမှာကြည့် …”
ဆယ်အိမ်ခေါင်း ကိုမြရဲ့ လက်မောင်းပေါ်က အကွင်းလိုက် ပေါ်နေတဲ့ ကိုက်
ရာတွေကို ကြည့်ရင်း ကျန်တဲ့သူအားလုံး ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေကြ
ပါတယ်။ ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေတဲ့ ဖိုးချစ်တို့ မိသားစုကို ကြည့်ရင်း ခေါင်းကုတ်
ရုံမှတပါး အားပေးစကားတွေ ထွက်မလာကြ။ စိတ်ပုတီးကြီး လည်မှာ
ဆွဲထားတဲ့ အဘစံကတော့ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ချောက်ကမ်းပါးကြီး တွေ့
ခဲ့တဲ့ ကိုမောင်ငြိမ်းတို့ မိသားစုကို အရင်ဆုံး လိုက်ပြန်ပို့ပေးရမလား၊ လူ
စကားပြောတဲ့ နွားပိုင်ရှင် ကိုဖိုးချစ်တို့ကို အရင် ဖျောင်းဖျပေးရမလားဖြင့်
ကိုမျိုးသိမ်းနှင့် မိကျော့တို့ မောင်နှမ အပါအ၀င် သူတို့အားလုံး
တနေကုန်အောင် ရွာအနှံ သွားနေမိပါတယ်။ တစ်ရွာလုံးလည်း သတင်းထူး
တွေ အတင်းထူးတွေကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ သယ်ဆောင်ပြီး ဟိုအိမ်ဖက် သွား
ကြည့်လိုက် ဒီအိမ်ဖက် သွားကြည့်လိုက်နဲ့ စည်းကား နေပါတယ်။ စိုးထိုက်
တစ်ယောက်ကတော့ ကိုမောင်ငြိမ်းတို့ အိမ်နောက်ဖေးက စိုက်ခင်းတွေကြား
“ညက ဒီနေရာမှာ ချိုင့်ဝှမ်းကြီး ဖြစ်သွားပြီး ကိုမောင်ငြိမ်းတို့ အိမ်လည်း
ချောက်ကမ်းပါးထိပ်က အိမ်လေး ဖြစ်သွားတယ်လို့ ညတုန်းက ပြောကြ
တယ်၊ ချောက်ကမ်းပါးကြီးဖြစ်ဖို့ လူမပြောနဲ့ စက်နဲ့တူးမယ်ဆိုရင်တောင်
လတွေ နှစ်တွေနဲ့ချီပြီး တူးရမှာ …”
(ကိုမျိုးသိမ်း) အရက်ကြောင် ကြောင်ပြီး လျှောက်ပြောတာပဲ ဖြစ်မှာပါ …။
(ကိုထွန်းကြိုင်) ရွာက ဥက္ကဋ္ဌကို မြို့တက်ခေါ်တဲ့ ကိုထွန်းရွှေတို့ ကိုတင်စန်း
တို့လည်း ပြန်မလာကြသေးဘူး၊ မြန်မြန် ပြန်လာရင် ကောင်းမယ် …။
(မိကျော့) ကိုထွန်းကြိုင်ကြီးက ရွာဥက္ကဋ္ဌကို ရွာကိစ္စအတွက် ပြန်လာ
စေချင်တာလား၊ မြို့က အလည်ရောက်နေတဲ့ ချစ်တီးပေါက်စတို့
စီးပွားရေးအတွက် ပြန်လာစေချင်တာလား … ။
(စိုးထိုက်) ကျနော်က ချစ်တီးလောက်တော့ အသား မမဲပါဘူးဗျာ …။
(အားလုံး) ဟားဟားဟား ….။
“ကိုတင်စန်းတို့ ပြန်ရောက်နေပြီ၊ အခု ရွာဦးကျောင်းက အဘဖိုးဆောင်
က တစ်ရွာလုံးကို အစည်းအဝေးခေါ်တယ်ဗျို့ …”
ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ရွာထိပ်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆီ သူ့ထက်ငါ
“ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့ပေါ်က အလှူအိမ်ကနေ သူ့အသိတွေနဲ့ ဘယ်လဲမသိဘူး
တစ်ညအိပ် နှစ်ညအိပ်လောက် သွားနေတဲ့တယ်တဲ့ဗျာ …”
“ဘကြီးရွှေကတော့ ဒီဆို ဟိုရောက်တဲ့ အကျင့်က မပျောက်သေးဘူး …”
“မင်းတို့ ဆရာတော်ဆီမှာရော မလျှောက်ခဲ့ဘူးလား …”
“လျှောက်ခဲ့ပါ့ဗျာ၊ မြို့ပေါ်မှာ သိမ်ထပ်တဲ့ အလှူရှိနေလို့ အလှူပြီးတာနဲ့
ပြန်ကြွခဲ့မယ်တဲ့၊ ရွာမှာ အခင်းအကြီးအငယ်ရှိရင် မောင်စံ(အဘစံ) ကို
မေးမြန်း တိုင်ပင်လို့ ဆရာတော်က မိန့်လိုက်တယ် …”
“အဘဖိုးဆောင်၊ ညက အော်သံတွေ ကြားရသေးလား …”
“မနေ့ညက ကိုရင်တွေနဲ့အတူ ကျက်သရေခန်းထဲ သွားအိပ်နေလို့
ဘာသံမှတော့ မကြားမိဘူး …”
Posted by ကိုအောင် at 14:17 17 comments
“ကိုယ်ကျင့်တရားကို လေးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် အောင်ပွဲကိုလည်း
သိက္ခာရှိသော နည်းဖြင့်သာ ရယူရသည်။ သိမ်ဖျင်းယုတ်ညံ့သော
နည်းလမ်းမျိုး ကိုကား မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်ရန် အတွက်ပင်
အသုံး မပြုသင့်” ----- ဆာတိုးရီးယပ်(စ) (Sertorius ဘီစီ ၁ရာစု)
ဒီနေ့ရာသီဥတုလေးက အတော်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေတယ်၊ မပူလွန်းမအေး
လွန်း အနေထား၊ အညာမြေမှာ ဒီလိုအနေထားမျိုးကို လူတော်တော်များများ
နှစ်ခြိုက်ကြတယ်၊ တခါတရံ မိုးနံ့လေးတွေပြေးနေတယ်၊နေလည်းမပူ ၊ မိုး
ကလည်း အအုံ့ကြီးမဟုတ်၊ တခါတရံမိုး ဖွားလေးများ ရွာချလာတတ်တယ်၊
ရုတ်တရက်နာရီကိုကြည့်လိုက်မှ ဒီအချိန်ဆို ကျနော့် လူတွေ အမှတ်တရ
လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စုံနေရော့မယ်၊ အကျီကို ကပျာကယာလည်းလိုက်ပြီး
ခပ်သုတ်သုတ်လေးထွက်လာခဲ့တယ်၊ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ မဆုံ ချင်တဲ့
လူတယောက်နဲ့လာဆုံဖြစ်ပြန်ပြီ ၊ ဘာလုပ်နေကြတာလည်းမသိ ကျနော့်
ဦးလေး အိမ်ထဲက ကောင်လေး၊ကောင်မလေး ၅ ယောက်လောက်နဲ့
ကျနော့် ငယ်သူငယ်ချင်း အောင်နိုင်---ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်၊
သူက မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး( ကြံ့ဖွတ် ) အဖွဲ့က အတွင်းရေးမှုး ကျနော်နဲ့
ဆယ်တန်းအထိသူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်၊ ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တော့
ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ သမဂ္ဂမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ဘူး
သူ၊ မှတ်မိတဲ့ တချက်က လူထုဟောပြောပွဲတခုမှာ-- ဒီမိုကရေစီရသည်အထိ
ကျနော့်ဘ၀ကို ပေးဆပ်သွားပါမယ်ဆိုတာကတိပြုပါတယ်တို့၊ ကျောင်းသား
သမဂ္ဂဆိုတာ ကျနော့်ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ပါတို့ပြောဆိုခဲ့ဘူးသူ၊ အော် --
ခုတော့လည်း တိုက်ပုံအကျီ အဖြူတကားကား၊ရင်ဘတ်မှာ ခြင်္သေ့တံဆိပ်
ရင်ထိုးကြီးက ကြွားကြွားဝံ့ဝံ့နဲ့၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာ သူပုန်တွေ စုဝေး
ထားတဲ့ တရားမ၀င် အဖွဲ့အစည်းတခုပါလို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဟစ်ကြွေး
နေလေရဲ့၊အာဏာရှင်စနစ်ကို နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ တိုက်ပွဲဝင်ပါမယ်လို့
ကျနော့်ဦးလေးဆိုသူကလည်း ငွေသာရမယ်ဆို ဘယ်လိုကိုယ်ကျင့်တရား
ကိုမဆိုချိုးဖောက်ဘို့ဝန်မလေးတတ်သူ၊ သူ့အိမ်ထဲက ထွက်လာတာကို
မြင်လိုက်ရတော့ ဂွင်တခုခုဖန်နေပြီဆိုတာ မမေးပဲနဲ့သဘောပေါက်နေပြီး
“ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ရေဒီယိုပျက် ” ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ၊ ဟုတ်တယ် ဘုန်းကြီးရူးက
ရေဒီယိုပျက်ကိုမှသွားတွေ့ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ။
ကျနော်လည်းမကောင်းတတ်လို့ ပြုံပြီးတချက်နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း မြန်မြန်
အဲဒီနားကခွာလာခဲ့ရတယ်။ အမှတ်တရ လဘက်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်တော့
ကိုယ့်လူတွေက လူစုံတက်စုံရောက်နေကြပြီ အားလုံးက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ရင်း
အပြုံးတွေကိုယ်ဆီနဲ့ ကျနော်ကလည်းပြန်ပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း ၀ိုင်း
ထိုင်လိုက်တယ်၊ ဒီတခါအပြုံးကတော့ ရင်ထဲအသဲထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ
“ ဒီနေ့ ဟိုရက်က ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာရဲ့အဆက်ကိုဆက်သွားချင်တယ် ”
ငြိမ်သွားကြတယ်။ ကျနော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ
“ အာဏာရှင်စနစ်မှာ ဘုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊တပါတီအာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ပစ္စည်းမဲ့
အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အ၀၀ကို တဦးတယောက် ဒါမှမဟုတ် တစုတဖွဲ့၊
တပါတီပေါ်မှာ စုပုံထားတယ်.. သူတို့က ထင်ရာစိုင်းလုပ်ခြင်ရာလုပ်တယ်..
အာဏာကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်တာတို့.. ခွဲဝေကျင့်သုံးတာတို့ဆိုတာမရှိ
ဘူး.. ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင် ဘက်ပဲ .. ဒီမိုကရေစီဟာ
ခဲ့တယ် .. ဟိုနေ့က ငါရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ.. ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုက ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေး…အာဏာကိုပြည်သူကပိုင်စိုးတယ်.. အာဏာရှင်မှာက
အာဏာကို လက်တဆုတ်စာ လူတစု၊ လူတယောက်က ချုပ်ကိုင်ထားတယ် ”
“ အကို ဟိုနေ့ကရှင်းပြခဲ့တဲ့အထဲက တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို ထပ်ရှင်း
“ အေသင်မြို့မှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရှေးဦး ဒီမိုကရေစီမှာတော့ မြို့သား
( ပြည်သူတွေ ) ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်…
တဦးတည်းပိုင်တဲ့ အာဏာဆိုတာမရှိဘူး….ပြည်သူအားလုံး မြို့လယ် လဟာပြင်
ဈေးမှာစုရုံးကြပြီး လုပ်ဆောင်ရမဲ့ ကိစ္စအ၀၀ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်.. အများစုဆန္ဒနဲ့အညီအတည်ပြုဆုံးဖြတ်..လုပ်ဆောင်ကြတယ်.. တဦးတယောက်၊
တစုတဖွဲ့ဆီကို အာဏာပေးအပ်ထားတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူး.. ဒီနေ့ခေတ်မှာ
တော့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ကန်တုံဒေသ ဆိုတာမှာ ကျင့်သုံးစဲပဲ.. နောက်တခါကွာ
သေးငယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ဒေသအတွင်းမှာတော့ တိုက်ရိုက် ဒီမိုကရေစီကို
ကျင့်သုံးကြတာပေါ့ ” ဆိုတော့ ထက်အောင် က……..
“ ကျနော် ဆယ်တန်းနှစ်က မှတ်မိသေးတယ် အကိုရ .. အတန်းထဲမှာ နှုတ်ဆက်
ပွဲလုပ်မယ်လုပ်တော့ စုပေါင်းပြီး ဘာချက်မယ်ညာချက်မယ်ဆို ဆွေးနွေးကြတယ်..
ကျနော်တို့အတန်းပိုင် ဆရာကြီးကလည်း ဒီမိုကရေစီသမားလားမသိဘူး..
အဲဒီမှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲချက်ချင်တဲ့ အုပ်စုနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးချက်ချင်တဲ့အုပ်စု
ဆိုပေါ်လာတယ်.. သူအုပ်စုအလိုက်ပေါ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲသမားကလည်း
သူ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲက ဘယ်လိုကောင်းကြောင်း… အကုန်ကျ ဘယ်လိုသက်သာ
ပျော်စရာလည်း ကောင်းပေါ့ဗျာ.. အဲဒါ ဆရာကြီးက ပထမစပြီး ကျေညာတယ်…
ကြတယ်…. အဲဒါကိုရေတယ်..ပြီးတော့ တခါမှတ်ထားတယ်..မုန့်ဟင်းခါးချက်မဲ့
အဲဒီနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ရေတွက်လိုက်တော့ မုန့်ဟင်းခါးချက်ချင်တဲ့ အုပ်စုက
“ အဲဒါ.. ဒီမိုကရေစီပေါ့.. တနည်းအားဖြင့် တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီအမျိုးစားပေါ့ ”
“ ငါတို့ကြတော့ ဒီလိုကွ…. တို့အတန်းထဲမှာ အတန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်
အဲဒါမျိုးကိုကြဘယ်လိုခေါ်နိုင်မလည်း အကို..” စန်းမောင်က ကျနော့်
“ ဒါက ကိုယ်စားပြု ဒီမိုကရေစီအမျိုးစားပေါ့…မင်းအတန်းထဲမှာရှိတဲ့
ကျောင်းသားတွေက မင်းကို အတန်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးလိုက်တော့
မင်းက အဲဒီကျောင်းသားတွေကို ကိုယ်စားပြုပေးရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွား
တယ်လေ…အဲဒီအတန်းခန်းဆောင်တွေက မှနောက်တခါ ကျောင်းကောင်စီ
အတွင်းရေးမှုး တယောက်ကို ထပ်ရွှေးပေးရတာဟာ ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီ
အမျိုးစား….ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးတဲ့ ပုံစံပေါ့…
မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးကနေ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လူထုက ရွှေးချယ်ပေးရတယ်
လေ..အဲဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကမှတခါ လူထု အကျိုးစီးပွားတွေကို ပြန်အကောင်ထည်
ဖော်ပေးရတယ်… မင်းတို့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲသွားစေဖို့ ဒီမိုကရေစီအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ကို ထပ်ပြောပြခြင်တယ်…ဒီမိုကရေစီဆိုတာ… ပြည်သူလူထု၏သဘောတူညီ
ချက်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၊ အမြင့်ဆုံးအာဏာဟာ ပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာ
ပဲတည်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အစိုးရစနစ်ကို ခေါ်တယ် ” ကျနော်စကားအဆုံးမှာ
လဘက်ရည်ခွက်ထဲမှာကျန်နေတဲ့ အကျန်လေးကို တကျိုက်ထဲ သောက်လိုက်ရင်း
က မျက်လုံးတချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ ဆိုင်ထဲကို ရအဖ ( ရပ်ကွက်အေးချမ်း
သာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ) ၀င်တချို့ဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
အဲဒီထဲက တယောက်က ကျနော့်ကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း သူတို့အစုလေးနဲ့
သူတို့ဘာတွေစတင်ဆွေးနွေးနေကြလည်းမသိ…. ကျနော်ကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်
ခဲ့တဲ့ ရအဖ တယောက်က တချိန်က သူလည်း ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ
တက်ကြွစွာပါဝင်လှုတ်ရှားခဲ့သူ..ခုတော့ ကျနော်တို့ကိုတောင်ခေါ်ရ ပြောရ…
နှုတ်ဆက်ရမှာ ကြောက်ရွံ့နေပုံရတယ်။ ကျနော်နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်၊
ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပါတ်က ရပ်ကွက်ကလူတွေဆင့်ခေါ်ပြီး ရပ်ကွက်အလယ်
က ပင်မလမ်းကြီးကိုပြင်ဘို့ အလှုငွေ မထဲ့မနေရတောင်းခံခဲ့တယ် ရပ်ကွက်တွင်း
က ပြည်သူတွေက အဲသလောက် ငွေကြေးကိုထဲ့ဝင်ဘို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို
ပြန်လှန်စောဒက တက်ကြတော့ ရအဖ ဥက္ကဌ လုပ်တဲ့သူက အထက်အမိန့်ရဆို
မဖြစ်မနေ ထဲ့ဝင်ရမယ်လို့ အမိန့်မပေးရုံတမယ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်၊ လူထုခမြာ
ဘာပြန်ပြောရဲရှာမလည်း သူတို့ကခြောက်လှန့်ထားတော့ ကြောက်ကြတာပေါ့၊
အဲဒီအစည်းဝေးမှာ ကျနော်ကသူတို့ကိုမေးခွန်းတခုမေးခဲ့တယ်၊ ကျနော်တို့
ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းတခုကို အလိုရှိတာအမှန်ပါ ဒါပေမဲ့
ဒီလောက်ငွေကြေး ထည့်ဝင်ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့လူထုအဖို့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဥက္ကဌ အနေနဲ့ အထက်အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြသင့်တယ်
နောက်တခါ ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေကိုလုပ်ဘို့ဆိုတာ အစိုးရမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်
“ ဒါကတော့ဗျာ အထက်လူကြီးတွေက ဖြူဆို ကျနော်တို့က ဖြူရမှာပဲ…
မဲဆိုမဲရမှာပဲ ” တဲ့ ……………
ကျနော်က သူတို့ကိုတွေ့ခါမှ သတိရပြီး အဲဒီ့အကြောင်းလေးကို ကျနော်တို့
လဘက်ရည်ဝိုင်းမှာ ခပ်တိုးတိုးရှင်းပြမိလိုက်တယ်။ နားထောင်နေတဲ့
“ဒါ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ အင်မတန်မှ ခါးသီးလှတဲ့.. အဖြစ်ဆိုးတွေပေါ့အကိုရာ…
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဆို ဒါမျိုးလုပ်လို့ဘယ်ရမလည်း.. လုပ်ကြည့်ပါလား…
နောက်တခါ မဲအရွှေးခံရင် သူတို့လိုလူမျိုးဘယ်တော့မှမဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး..
“ သိပ်မှန်တာပေါ့ ” ထက်အောင်က ကြားထဲမှဖြတ်ပြီးဝင်ရောက်ထောက်ခံရင်း…
“ ကျနော်ကြားဘူးတဲ့.. ဖြစ်ရပ်လေးတခုပြောခြင်သေးတယ်ဗျ ” သူကပြုံးဖြီးဖြီးကြီး
“ တခါက စစ်တပ်က အရာရှိလုပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်က သူတို့တပ်ရံပုံငွေအတွက်
ဆို မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတခုလုပ်တယ်လေ..တနေ့ သူ့မွေးမြူရေးခြံတွေကို
ရဲဘော်က အရာရှိလုပ်သူကို ဆီးကြိုအလေးပြုရင်း..မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေ
ကို လိုက်လံရှင်းလင်းပြသတယ်…အရာရှိလုပ်သူကလည်း ခေါင်းလေးတငြိမ့်ငြိမ့်
“ အခု ၀က်တွေမွေးထားတာနော် ” ၀က်တွေကိုမြင်နေရက်သားနဲ့ ရဲဘော်ကို
လှမ်းမေးလိုက်တယ်…..ရဲဘော်လုပ်သူကလည်း ချက်ခြင်း သတိကောက်ဆွဲတဲ့ပြီး…
“ ဟုတ်..ဗိုလ်မှုး..၀က်တွေပါ ” အရာရှိလုပ်သူက ၀က်တွေနားကိုကပ်သွားပြီး
“ ဟုတ်..ဗိုလ်မှုး ၀က်မတွေပါ ” တခါ ရဲဘော်လုပ်သူက အရာရှိလုပ်သူရဲ့စကား
ကို သတိဆွဲပြီးပြန်ဖြေလိုက်ပြန်တယ်..အရာရှိလုပ်သူက ၀က်တွေကို ကြည့်ရင်း..
“ ဟာ…ဘယ်ကလာ..၀က်မတွေရမလည်း..သေသေချာချာကြည့်မှ ၀က်ထီးတွေ
ပဲကွ ” ဆိုတော့
“ ဟုတ်..ဗိုလ်မှုး..၀က်ထီးတွေပါ… ” အရာရှိလုပ်သူက ရဲဘော်ကို မကျေနပ်တဲ့
“မင်း ဟာကလည်းကွာ.. ငါဘာပြောပြော ဖော်လို ( follow ) ပဲလိုက်နေတော့
တာပဲ ” လို့ ဆိုတော့ ရဲဘော်ကချက်ခြင်းပဲ သတိပြန်ဆွဲတဲ့ပြီး….
“ ဟုတ်..ဗိုလ်မှုး … ဖော်လို ( follow ) ပါ ဗိုလ်မှုး ”
အားလုံးဝါးကနဲ ပွဲကျသွားကြတယ်။ဘေးခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ထိုင်နေကြတဲ့
ရအဖ တွေက မလုံမလဲ မျက်နှာသွင်ပြင်တွေနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီး ကုတ်ကုတ်…
ကုတ်ကုတ်နဲ့ပဲ ခေါင်းခြင်းဆိုင် ဘာတွေပြောနေလည်းမသိ၊ ရီသံတွေစဲသွားမှ
“ထက်အောင် ပြောလိုက်တာ.. ဒီနေ့ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ လက်ပါးစေတွေကို
“ ရည်ညွန်းတာမဟုတ်ဘူး အကိုရ.. ကျနော်က ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာလို့တောင်
ရဲရဲပြောခြင်တယ် ” ထက်အောင် စကားအဆုံးမှာ စန်းမောင်က လက်မကို
အသာလေးဖွက်ပြီး ရအဖ တွေဘက်ထိုးညွှန်ပြလိုက်တော့.. ထက်အောင်က
သွားစမ်းပါ ဆိုတယ့် စိတ်ကုန်ခန်းသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ မျက်နှာကိုရှုံတွ လုပ်ပြနေ
“အဲဒီအချိန်က.. အေသင်က စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အတွေးအခေါ်
က တဖြေးဖြေးနဲ့ မြို့ပြနိုင်ငံတွေဆီကူးသွားခဲ့တယ်.. မြို့ပြနိုင်ငံဆိုတာ…မြို့
တမြို့ခြင်းဆီက..နိုင်ငံလိုဖြစ်နေတာ…အခု မင်းတို့တွေ့နေ သိနေရတဲ့ နိုင်ငံ
တွေလို အကြီးကြီးတွေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ကွာ..ဒီမိုကရေစီသက်တမ်း ကလည်း
နုသေးတော့ အခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တော့ကြုံတွေ့ရတာပေါ့…. လိုအပ်ချက်
တွေလည်း အများကြီးပေါ့.. စစခြင်းမှာတော့ .. ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို.. တိုက်ရိုက်
ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ပဲသွားခဲ့တာ..နောက်တခါ မဲပေးရွှေးချယ်တဲ့ အခါမှာလည်း
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိမှတို့ မိန်းမတွေဆို မဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတာတို့
အဲသလိုတွေ……..အခုခေတ် အောင်မြင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး
တွေ ထူထောင်နိုင်ဘို့ အတွေ့အကြုံတွေ ၊ သင်ခန်းစာတွေ အများကြီး
“ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ ကာလတစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့
ဘူးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်.. အဲဒါ ဘယ်တုန်းကလည်း အကို ”
“လွတ်လပ်ရေးရပြီးစအချိန်လောက်ကပေါ့ ( ၁၉၄၈ ကနေ ၁၉၆၂ ထိပဲ)
သိပ်ကြာကြာ မခံလိုက်ပါဘူးကွာ… ဆယ်လေးနှစ် သက်တမ်းပဲရှိသေးတယ်…
“ကျနော်တို့ အဲဒီ သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလည်း သိချင်တယ် အကိုရာ …
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ တကယ်ကိုသိထားသင့်တဲ့ အရာတွေပါ ”
ကျနော် လူငယ်တွေကို တော်တော်သနားသွားတယ်။ စစ်အာဏာရှင်
အဆက်ဆက်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ရိုက်ချိုးပြီး သူတို့ရဲ့
ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေကလွဲလို့ ဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ထုတ်ဖွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး၊
ဒါကလည်း နိုင်ငံရေးသားကြောဖြတ်နည်းတမျိုးပါ၊ ကျနော်တို့တတွေတောင်မှ
၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးကမွေးဖွားပေးလိုက်လို့ နိုင်ငံရေးကို သိခွင့်လေ့လာခွင့်
ရခဲ့တာကိုး၊ အကယ်လို့များ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးသာ ပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ဘူး
ဆိုရင် ကျနော်လည်း သူတို့နဲ့ ဘာမှမထူး ဘာကိုမှသိခွင့်မရ၊ သိဖို့ကိုလည်း
“ငါ အခု..ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံလေး အစပျိုးပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ…နိုင်ငံရေး
ဆိုတာ ဘာလည်း…တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဖြစ်စဉ်လေးကိုလည်း အကျဉ်းချုံးပြောပြ
ချင်သေးသကွ ..ဒါတွေကို ငါဆက်ပြောသွားပေးပါ့မယ်..”
“ကောင်းတာပေါ့ အကိုရာ အထူးသဖြင့် ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာမွေးလာတဲ့
လူငယ်တွေတချို့က ကျနော်တို့ကို အဲဒီသမိုင်းကြောင်းတွေမေးတာတောင်
ကျနော်တို့မဖြေနိုင်ဘူး.. ကျနော်တို့လည်း ကောင်းကောင်းမှမသိကြတာ
ကျနော်ဆို ၈၈ တုန်းက ငါးတန်းကျောင်းသားပဲရှိသေးတာ ဘာမှ
ကျန်တာဘာမှမသိဘူး..ကျနော်က အဲဒီတုန်းက ပျော်နေတာဗျ… စိတ်ထဲ
မှာတော့ ရေးတေးတေးပါပဲ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဘာမှန်းမသိတော့
နောက်မျိုးဆက်တွေကိုရှင်းပြဘို့ဆိုတာက ခက်တယ်ဗျ ” ထက်အောင်က
“စကားလမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာစိုးတယ်….ငါ ပြောလက်စ ဒီမိုကရေစီ အကြောင်း
လေး ခရီးဆက်ခြင်သေးတယ်ကွ..ဒီလို..ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့တော်လှန်တဲ့ အတွေး
အခေါ်တရပ်က နေရာအနှံ့ဒေသအနှံ့ကိုပြန့်သွားပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ
တယ်….ပဒေသရာဇ် အာဏာရှင်ကနေ... ပြည်သူ့အာဏာ ပိုင်စိုးလာတာပေါ့
ကွာ… နှစ်ကာလတွေကျော်ဖြတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒီမိုကရေစီသဘော
တရားကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် မွန်းမံပြင်ဆင် ကျင့်သုံး လာရင်း…
“အကို ကျနော် သိပ်မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်…ဘယ်လို နိုင်ငံရေးအယူအဆ
“လူဦးရေနည်းနည်းလေးအခြေနေမှာ ကိစ္စသိပ်မရှိလှပေမဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံလို တည်ရှိနေတဲ့ဒေသကြီးမျိုးမှာကြ..အယူအဆတွေက လိုလာပြီလေ…လူထုက
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကိုယ်စားပြု အုပ်ချုပ်သူများကို ပြည်သူလူထုကိုယ်စား
အယူအဆတွေနဲ့ လူထုကို စီမံမှာလည်းဆိုတဲ့ ပြသနာအပေါ်မှာအခြေခံရင်း
က…နိုင်ငံရေး အယူအဆတွေပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်..ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ
အထင်ရှားဆုံး နိုင်ငံရေးအယူအဆကို ပြောပါဆိုရင်တော့ လက်ယာလို့
ခေါ်တဲ့ ( အရင်းရှင်စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးဝါဒနဲ့ ) လက်ဝဲ လို့ခေါ်တဲ့
( ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်ကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးဝါဒတွေကတော့ အထင်ရှား
ဆုံးနဲ့ ယနေ့အထိ ဂယက်တွေရိုက်ခပ်ဆဲပဲပေါ့…..” ကျနော့် စကားအဆုံးမှာ
လိုက်ရတော့ ကျနော်လည်းပြောရတာ အားရှိလာတယ်…။
“ဒီအယူအဆတွေ အကြောင်းလည်း မင်းတို့ တီးမိ ခပ်မိအောင် ငါရှင်းပြ
ပေးပါဦးမယ်…ငါပြောခဲ့တာတွေမှာ ရှုပ်ထွေး သွားနိုင်တာတွေများ ပါသွား
“မပါ ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ သိခြင်တာတွေတော့များလာတယ် ” စန်းမောင်က
ဒီနေ့ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ ဘာနဲ့တူသလည်းဆိုတော့... အင်ဂျင်စက်
တစ်လုံးလိုပဲကွ…. အင်ဂျင်စက်ဆိုတာ သူချည်းဘာမှသုံးလို့ ရတာ
ကားအင်ဂျင်ပေါ့၊ လေယာဉ်နဲ့တွဲလိုက်တော့လေယာဉ်အင်ဂျင်ပေါ့ ၊ သူရဲ့
ပကတိ အရှိတရား အင်ဂျင်ဆိုတဲ့ အရာကို ပေါင်းစပ်တန်ဘိုးတွေနဲ့ တွဲလိုက်
ရင်းက အမျိုးမျိုးသော ပြောင်းလည်းမှု့တွေတော့ရှိတာပေါ့..ထိုနည်းတူစွာ
ပဲ.. ဒီမိုကရေစီကိုလည်း ပေါင်းစပ်တန်ဘိုးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေ
နဲ့တွဲဘက်သုံးကြတယ်…ဒီမိုကရေစီကို လက်ဝဲ၊လက်ယာ အယူအဆတွေနဲ့
တွဲသုံးကြတယ်….လက်ယာအယူအဆဖြစ်တဲ့ အရင်းရှင် နဲ့တွဲစပ်ပြီးတော့
အရင်းရှင်ဒီမိုကရေစီ ( နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခေတ်မှီတဲ့ အတွေးအခေါ်
ဖြစ်တည်လာတဲ့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ တနည်းအားဖြင့် လွတ်လပ်တဲ့
ဒီမိုကရေစီ နောက်တခုက လက်ဝဲအယူအဆဖြစ်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်
၀ါဒတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုကရေစီ နောက် ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ
(ကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုပေါင်းစပ်ထားတာ ) ဒါပေမဲ့လည်း ငါလေ့လာ
မိသလောက် လက်ဝဲ၀ါဒမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နာမည်ခံ အရောင်ပြ
ရှယ် တွေပါပဲ ”
“ မင်းတို့ အတိုင်းတာတခုထိနားလည်သွားမယ်ဆို ငါကျေနပ်ပါတယ်…
မိတယ်ကွ….သူ ကဗျာရေးတဲ့ အခါ အခက်ဆုံးက ကလေးကဗျာရေးရ
တာပဲတဲ့ ….. ငါဆိုလိုတာက မင်းတို့ကို ကလေးလို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး..
ရှင်းတယ်၊ အတွေးရှင်းတယ်..သူတို့ရဲ့လက်ခံနိုင်မှု့စွမ်းအားက သိပ်မမြင့်
သေးဘူး..အဲဒီလို အခြေနေမျိုးမှာ ရှောရှောရှုရှု ခေါင်းထဲကိုဝင်သွားဖို့
“ အကိုလည်း အချိန်ပေးရတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ.. နောက်နေ့မှပဲ…
စန်းမောင် ကပြောပြောဆိုဆို အိပ်ကပ်ထဲကပိုက်ဆံကိုဆွဲထုတ်ရင်းက…
ပိုက်ဆံတွေကိုရေဟန်ပြုပြီး တုန်တုန် တုန်တုန်လုပ်ပြနေတော့ ကျနော်တို့
(အပိုင်း ( ၃ ) ဆက်ပါဦးမည်။)
Posted by ကိုအောင် at 10:54 1 comments
ယခင် အပိုင်း(၁)မှ အဆက် ….
Posted by ကိုအောင် at 19:02 11 comments
နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြား တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းလာတိုင်း
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်ပါလို့ ဆုတွေတောင်း၊ မင်္ဂလာအပေါင်း
နှင့် ပြည့်စုံပါစေ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနေအထားတွေ
ရရှိပါစေ၊ ဒီထက် တိုးတက်အောင်မြင်သော ခြေလှမ်းတွေ
ရရှိဖို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ တွေထက် ပိုမိုပြီး သက်တောင့်
သက်သာ ဖြစ်စေမယ့် သက္ကရာဇ် တစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ ဒီစာကို
ရေးတဲ့ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ လုံးဝ မထင်ပါဘူး။ ၂၀၁၁ နှစ်ထဲမှာ
ရှင်သန်ရမယ့် လူသားဟာ ယခင် ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တွေထဲက
လူသားထက် အခက်အခဲပိုင်းဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ များ မလာ
ရင်တောင် နည်းနည်းလေးမှ လျှော့နည်းစေမယ့် အနေအထား
လုံးဝ မရှိပါဘူး။၂၀၀၉ ခုနှစ် ကတည်းက ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုဟာလည်း အနည်းငယ် ပြန်လည် ဦးမော့
လာတယ် ဆိုပေမယ့် အရင်လို အနေအထားမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
၂၀၁၁ ဆိုတဲ့ ခုနှစ်ဟာ “သတိ”တွေ၊ အလုပ် လုပ်ပုံ ငွေကြေးသုံးစွဲပုံ
“နည်းစနစ်”တွေ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားနေရမယ့် နှစ်တစ်နှစ်
လို့ ထင်မိပါတယ်။ အနောက်အုပ်စုဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ အလုပ် လက်မဲ့
ဦးရေ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားမယ့် အနေအထားလည်း မရှိသေး
ပါဘူး။ ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ပြဿနာ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေး ပြဿနာတွေလည်း ဗိုလ်နေမြဲ ကျားနေမြဲ
ပဲ ဆက်ရှိနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီဂယက်တွေကြားမှာ ၂၀၁၁ ထဲ
ဘယ်လိုနေထိုင်ပြီး ဘယ်လို ဖြတ်သန်းကြမလဲလို့ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ
ဒီ“လ” ကုန်ရင် ဘာလေး ၀ယ်မယ်၊ “ဘယ်လ” ကုန်ရင် ဘယ်ကို
သွားလည်မယ်၊ “ဘယ်လ”ထဲက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် “ဘယ်ပွဲတော်”လေး
ရှိနေလို့ “ဘာတွေ” ထပ်ကုန်မယ် … စသဖြင့် ရှိတတ်ကြပါတယ်။
“အလဟဿ” ဖြုန်းတီးမှုတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကို ကြိုတင်
ကာကွယ်ထားကြပါဖို့ လိုပါတယ်။ စနစ် ဇယား ကြီးမားတဲ့ လူ့အဖွဲ့
အစည်းတွေနဲ့ စီးပွားရေး ထုထည်ကြီးတွေတောင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉
နဲ့ ၂၀၁၀ ထဲမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီး
လစဉ် ၀င်ငွေနဲ့ လစဉ် ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ ခွဲဝေ သုံးစွဲပုံတွေ၊ အခြား
ထွက်ငွေတွေကို သေသေချာချာ ကြိုတင် အကွက်ချ ထားသင့်ပါတယ်။
မလုပ်တတ်ရင်လည်း စီးပွားရေးနဲ့ ကျောင်းပြီးလာတဲ့ နီးစပ်ရာ အသိ
မိတ်ဆွေများထံ အကူအညီတောင်းပြီး လုပ်ကြပါ။ ငွေကြေးတစ်ခုတည်း
တန်ဖိုးရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သက်တာတွေ၊ အချိန်
သုံးစွဲတဲ့ စနစ်တွေပါ စဉ်းစားကြပါ။ လကုန်ရင် လစာဝင်လာမယ်၊ ပေးစရာ
ရှိတာတွေ သူ့ဖာသာ အော်တိုမက်တစ် နုတ်(-) သွားမယ်လို့ အပေါ်ယံ
မယူဆ သင့်ပါဘူး။ တစ်ဦးချင်းအလိုက် မိသားစုအလိုက် “အရေးပေါ်
အခြေအနေ” တစုံတရာ ရင်ဆိုင်ရရင် ဖြေရှင်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားသင့်
ပါတယ်။ အဲဒီ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုဟာလည်း ပုံစံကျတဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်
မှုမျိုး ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါ။ အရေးအကြောင်း ရှိလာရင် နီးစပ်ရာဆီ
အကူအညီ တောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူး မယဉ်ကြပါနဲ့။ ကိုယ့်ပြဿနာ
ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါ။
စီးပွားရေးနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးမှ မဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံရေးလည်း ဒီလို
ပါပဲ။ ထစ်ကနဲ ရှိရင် ကုလသမဂ္ဂတို့ လုံခြုံရေးကောင်စီတို့ အာဆီယံ
တို့ ချက်ချင်း လာ မကယ်နိုင်ပါဘူး။(ကယ်တင်တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ အနေ
အထားလည်း မရှိခဲ့သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။) ဒုက္ခပေးစရာရှိရင်သာ
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေရော အဝေးက နိုင်ငံတွေပါ အချိန်မရွေး ဒုက္ခပေးကြ
တာပါ။ “အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ” လို့ အားလုံးနီးပါက လက်ခံထား
ကြပါတယ်။ ထိရောက်ပြီး ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများမယ့် အလှူအတန်း
တွေလည်း လုပ်ကြပါ၊ ရှေ့ရေး နောက်ရေးအတွက် “အရန်အင်အား”
တွေလည်း ထားရှိကြပါ။ ရာစုနှစ်တွေ ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ နည်းပညာ
တိုးတက်မှုတွေနှင့်အတူ အခက်အခဲတွေ ပြဿနာအသစ်တွေလည်း
လိုက်ပြီး တိုးတက်ကြတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့ဗျာ …..။
နှစ်သစ်မှာ “ပျော်ရွှင်ပါစေ”လို့ ဘလော့ ရေးဖေါ်ရေးဖက်တွေရော
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများကိုပါ ဆိုပါရစေ ….။
Posted by ကိုအောင် at 03:179comments
Posted by ကိုအောင် at 09:43 8 comments